Complete Packages for FM Radio Station & FM Radio Studio
Dalabka jumlada ayaa hadda diyaar ah, halkan waxaa ah liiska dhameystiran ee qalabka idaacada FM ee lagu heli karo qiimaha ugu wanaagsan FMUSER:
#1 Xidhmada qalabka idaacada FM oo dhamaystiran: inta badan waxay ka kooban tahay qalabka baahinta ee kor ku xusan, oo badi u qaybsan qalabka gudbinta FM-ka sida gudbiyaasha FM-ta, nidaamka anteenada iyo qalabka istuudiyaha idaacadaha FM sida mixer, processor audio. >>In ka badan.
#2 Xirmooyinka gudbinta FM oo dhammaystiranWargeysyada FM-ta tayada sare leh oo ay ku xiran yihiin anteenooyinka raadiyaha FM-ka ee ugu wanaagsan, gudbiyeyaashu waa ikhtiyaari laga bilaabo taxanaha awoodda hooseeya (≤50W), taxane koronto dhexdhexaad ah (≤50W - 1KW) iyo taxane awood sare ah (≥10KW), halka anteenooyinku ay yihiin ikhtiyaari noocyo kala duwan ah. (dipole, dayuurad dhulka, iwm) oo leh meelo badan. Fiilooyinka & agabka waa lacag dheeraad ah. Sida ugu fiican idaacadaha FM ee awooda sare leh, kaniisada lagu wado iyo in lagu wado tiyaatarka. >>In ka badan.
#3 Nidaamyada anteenada FM oo dhameystiran: hal / dhowr bays oo anteeno FM ah oo leh fiilooyinka anteenada & agabka, sida ugu fiican ee kor loogu qaado munaaradda FM, ikhtiyaari anteeno FM dipole, anteeno wareeg ah iyo anteeno diyaarad dhulka ah, had iyo jeer kayd bay ku jiraan. >>In ka badan.
#4 Xirmooyinka qalabka istuudiyo raadiyaha FM oo dhameystiranQalabka istuudiyaha ugu fiican, oo laga dooran karo makarafoonka, isku-darka maqalka, processor-ka maqalka, miisaska baahinta, iwm. Qalabkan qiimaha jaban ayaa si fiican ula jaanqaadi doona xaruntaada gudbiyaha ee FM, waxayna si joogto ah ugu shaqayn karaan muddo dheer istuudiyaha raadiyaha FM. >>In ka badan.
Xirmooyinkan qalabka baahinta ah waxay ku habboon yihiin idaacadaha dadweynaha iyo kuwa ganacsiga ee FM-ta, tusaale ahaan, idaacadaha kambaska, idaacadaha bulshada, idaacadaha magaalada iyo kuwa miyiga, iwm. Gudiyaha FM-ta tayada sare leh ma go'aamin karo kaliya tayada wax soo saarka maqalka, laakiin sidoo kale nolosha baahinta kharashka badan ee raadiyahaaga, adoo isticmaalaya anteenooyinka FM-ka badan, waxaad sidoo kale awood u yeelan kartaa inaad kordhiso baahinta baahinta. Haddii aad raadinayso iskaashi wakhti dheer ah sahayda qalabka baahinta raadiyaha, FMUSER ayaa noqon doonta doorashadaada ugu fiican ee baahiyaha shaqsi ama ganacsi. Intaa waxaa dheer, amarrada la habeeyey ee qalab kasta oo idaacadaha lagu baahiyo mar walba waa la soo dhaweynayaa, fadlan weydii faahfaahinta markaad mid u baahan tahay, waxaad ka heli kartaa dalabka ugu fiican FMUSER. Waxaan bixinaa qalabka idaacada FM oo leh noocyo kala duwan, sida gudbiyaha 1KW FM, anteenada 2-bay diople FM, iyo wixii la mid ah. Fadlan nala soo xidhiidh haddii aad raadinayso wax aan kor ku xusnayn. FMUSER waa soo saaraha ugu sarreeya ee ku hawlan wax soo saarka adduunka iyo bixinta qalabka baahinta raadiyaha, oo leh taxane badeecado ah oo ka socda xirmooyin gudbiye FM oo dhameystiran, nidaamka anteenada FM tayo sare leh, xirmooyinka idaacada FM-ka (gudiyeyaasha FM-yada leh anteeno) iyo xirmada istuudiyaha FM-ka , processor audio, iwm), tayada ugu fiican & qiimaha ugu fiican sida had iyo jeer.
FU-1000C 1KW FM Gudbiye leh 1 Bay Antenna iyo Agabka
Qiimaha (USD): 2749
FU-1000C oo leh RDS Encoder iyo FU-DV1 Xidhmada Nidaamka Anteenada
Qiimaha (USD): 2999
FU-1000C oo wata FU-DV1 Xidhmada Nidaamka Anteenada
Qiimaha (USD): 2699
FMUSER FU-1000C Dhaqaale 1KW FM Gudbiye leh RDS Encoder
Qiimaha (USD): 2599
Xirmada Gudbiyaha FM 1KW oo leh RDS Encoder
Qiimaha (USD): 3469
Xidhmada Idaacadda FMUSER FSN5-600W FM oo leh 4 Bay FM Antenna iyo Codeeyaha RDS
Qiimaha (USD): 3289
Xirmada Adag 10kw FM Gudbiye leh 8 bay FM Dipole Antenna
Qiimaha (USD): 43700
Xidhmada Adag ee 5kw FM Gudbiye leh 6 Bay FM Dipole Antenada
Qiimaha (USD): 29,765
Xidhmada 2KW FM Gudbiye leh 2 Bay FM Antenna
Qiimaha (USD): 7730
FU618F-2000C waa gudbiyaha baahinta stereo FM is haysta. Tignoolajiyada horumarsan ee dhijitaalka ah, soo-saareyaasha calaamadaha dhijitaalka ah (DSP), iyo soo-saareyaal toos ah oo dhijitaal ah (DDS) ayaa loo adeegsadaa gudbiyaha si loo gaaro cabbir yar, waxqabad sare, iyo isku hallayn sare. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa idaacadaha xirfadleyda ah si ay u gudbiyaan calaamadaha barnaamijka raadiyaha FM-ta oo tayo sare leh. Iyada oo leh 1-BAY FU-DV1 Dipole Antenna kaas oo loogu talagalay nidaamyada baahinta FM ee xirfadleyda ah si ay u helaan calaamadaha awoodda wax soo saarka ee gudbiyaasha baahinta FM oo ay si hufan ugu diraan. Waxay isticmaali kartaa anteenooyin badan oo anteeno ah si ay u sameeyaan anteeno array si ay u wanaajiso faa'iidada. Si fudud loo rakibo, si sahlan loo isticmaali karo, signalka gudbinta waxtarka sare leh, iyo wixii la mid ah ayaa ah sifooyinka anteenada dipole.
FMUSER FM-DV1 1/2/4/6/8 Bay Dipole FM Antenna
Qiimaha(USD): Booqo wax badan
Iibka: Booqo wax badan
FMUSER GP100 1/4 Wave Ground Plane Anteennada Xidhmada Anteenada Nidaamka Iibka oo Dhamaystiran
Qiimaha (USD): 105
FMUSER GP100 waa anteeno GP-ga aluminium ah oo xirfad leh. Inta badan waxaa lagu isticmaalaa gudbiyaasha FM-ta yar sida 1W, 4W, 5W, 7W, 15W, 30W, iwm.
1KW FM Gudbiye leh 1 Bay FM Dipole Antenna
Qiimaha (USD): 3,609
Xirmada Adag 5kw FM Gudbiye leh 8 bay FM Dipole Antenna
Qiimaha (USD): 31000
Xidhmada 2KW FM Gudbiye leh 2 Bay FM Antenna iyo Antenna Assorries
Qiimaha (USD): 7,600
FU618F-2000C waa gudbiyaha baahinta stereo FM is haysta. Tignoolajiyada horumarsan ee dhijitaalka ah, Processor Signal Digital (DSP) iyo Digital Direct Synthesizer (DDS) ayaa loo adeegsadaa gudbinta si ay u helaan cabbir yar, waxqabad sare, iyo isku halaynta sare. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa idaacadaha xirfadleyda ah si ay u gudbiyaan barnaamijyada raadiyaha FM-ta oo tayo sare leh.
FMUSER FU-DV1 1 Bay Dipole FM Anteeno leh 30M 1/2" Cable
Qiimaha (USD): 500
FMUSER FU-DV1 waa anteeno FM dipole ah oo si gaar ah loogu talagalay nidaamka baahinta FM-ka, kaas oo loo isticmaalo in si hufan loo helo oo loo gudbiyo signalka awoodda wax soo saarka ee gudbiyaha baahinta FM.
FMUSER 1/2 Wave GP200 Anteeno leh Cable 33-Food, BNC & SL16 Xidhiidhiyaha
Qiimaha (USD): 125
FMUSER GP200 1/2 wave FM anteeno waa anteeno cusub oo loogu talagalay idaacadaha FM, oo leh SL16 ilaa BNC RF isku xiraha.
1kW FM Gudbiye leh 1 Bay FM Dipole Antenada Xidhmada
Qiimaha (USD): 3,589
FMUSER FM-DV1 Laba Bay FM Gudbiyaha Anteenada 2 Bay FM Dipole Anteenada Iibka
Qiimaha(USD): Fadlan nala soo xidhiidh
FU618F-2KW waa rack FM stereo baahinta baahinta, waxay ka kooban tahay hal FM oo dhijitaal ah, 2pcs oo ah 1KW koronto, hal 2-way kala qaybisa, hal iskudar 2-way ah, iyo hal koontarool oo soo bandhigaya unug. Dhammaan kuwan waxaa lagu rakibay 1.1-mitir oo sare oo 19-inji ah. Way fududahay in la ilaaliyo. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa idaacadaha xirfadleyda ah si ay u gudbiyaan barnaamijyada raadiyaha FM tayo sare leh.
Xirmada Gudbiyaha 1KW FM oo leh 1 Bay Antenna iyo Encoder RDS
Qiimaha (USD): 3909
FMUSER FM-DV1 Afar Bay FM Gudiyaha Anteenada 4 Bay FM Dipole Anteenada Iibka
Xirmada Saldhigga Raadiyaha BS-1M Eco 1KW FM ee Iibka
Qiimaha (USD): 2880
Xirmada Saldhigga Raadiyaha ee BS-2M Pro 1KW FM oo iib ah
Qiimaha (USD): 3780
Xidhmada Idaacada FM 150W Dhamaystiran ee Iibka
Qiimaha (USD): 2899
Xirmada Gudbiyaha FM 1.5KW oo leh 2 Bay Dipole Antenna FU-DV2
Qiimaha (USD): 4649
Xirmada Gudbiyaha FM 1.5KW oo leh 4 Bay Dipole Antenna FU-DV2
Qiimaha (USD): 5149
Xirmada Gudbiyaha 1KW FM oo leh 4 Bay Antenna iyo Encoder RDS
Qiimaha (USD): 4889
FMUSER FM-DV1 Lix Bay FM Gudiyaha Anteenada 6 Bay FM Dipole Anteenada iibka ah
Qiimaha (USD): 3765
FMUSER FU-DV2 Dipole FM Anteeno leh 20M SYV-50-7 Cable
Qiimaha (USD): 415
Awoodda ugu badan ee FU-DV2 waxaa la hagaajin karaa ilaa 1KW.
FMUSER DP100 Dipole FM Anteeno leh 8-Meter RG58 Cable
Anteenada dipole waa anteenada raadiyaha oo laga samayn karo aluminium, naxaas, iyo tuubo naxaas ah oo leh curiye dhexdhexaad ah.
350W FM Radio Station oo leh 2 Bay Antenna iyo RDS Encoder
Qiimaha (USD): 2,139
Qiimaha (USD): 1,939
FMUSER wuxuu halkan ku soo bandhigayaa xirmada gudbiyaha ee FSN-350T 350W shaashadda taabashada FM ee ugu dambeysay ee xarumaha raadiyaha dhammaan taageerayaasha FM.
FMUSER 50W Buuxi Xidhmada Saldhigga Raadiyaha FM ee Iibka
Qiimaha(USD): Nala Soo Xidhiidh
Dhammaan ku saabsan Idaacadaha FM-ta
Tilmaamaha Hawlaha & Dayactirka
Sidee loo Dhisayaa Idaacad FM ah? Tilmaan-tallaabo-tallaabo ah
Muddo sanado ah oo aan ku guda jirnay ganacsiga qalabka baahinta, waxaan aragnay in macaamiil badan, inkastoo qarashka, waqtiga, iwm, ay jeclaan lahaayeen in ay helaan idaacad FM-ta ugu horreysa ama ay cusbooneysiiyaan waxa ay hore ugu haysteen idaacada, laakiin haddana waxaa jira tiro aad u badan. macaamiisha aan aqoon u lahayn sida loo dhiso idaacad dhamaystiran oo loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed/ganacsiga si guul leh.
Had iyo jeer waxa nala waydiin jiray, "Ma haysaa liiska qalabka idaacadaha oo la tixraaci karo?", si fiican, jawaabtu waa "Waa hubaal inaan samayno". Waxaan bixinaa qalab baahinta raadiyaha oo jaban laga bilaabo gudbiyaasha ilaa nidaamyada anteenada! Dabcan, waxaa jira su'aalo kale oo la mid ah sida "Waa maxay qiimaha" ama "Sida loo dhiso" qalabka cusboonaysiinta iyo ballaarinta. Waa kan liiska su'aalaha soo noqnoqda ee FMUSER inta badan ka helo macaamiisha:
- Ma bixisaa liiska qalabka idaacada FM oo dhamaystiran?
- Qalabkee ayaan u baahanahay si aan u iibsado si aan u bilaabo xarun raadiye?
- Waa maxay kharashka ku baxa idaacad faa'iido leh?
- Immisa nooc oo qalab baahinta ah ayaa ka jira raadiyaha khabiirka ah?
- Waa maxay qalabka laga helo idaacada?
- Maxaan ugu baahanahay liiska qalabka idaacadaha?
- Sidee loo qeexaa qalabka baahinta raadiyaha?
- Ma bixisaa qalab idaacad jaban oo iib ah?
- Waa maxay xidhmada qalabka idaacada oo dhamaystiran?
- Sidee loo balaadhiyaa daboolida gudbiyaha raadiyaha FM?
- Halkee laga helaa soo saaraha qalabka idaacada ugu fiican?
- Halkeen ka iibsan karaa qalabka idaacadaha ugu fiican?
- Sidee loo doortaa qalabka baahinta ugu fiican ee noocyada kala duwan?
- Ma iibsan karaa xirmo kasta oo qalab baahinta ah oo qiimo jaban ah?
- Waa maxay qiimaha ugu fiican ee aad ku bixin karto nidaamka anteenada?
Waxaad si sahlan u heli kartaa jawaabta haddii aad Google-ka waydiiso su'aalaha sida "Huteelka ugu fiican ee u dhow gurigeyga" ama "Xagee ku yaala jimicsiga kuugu dhow", laakiin arrimaha ganacsiga sida "qalabka idaacadaha ugu fiican" ama " alaab-qeybiye raadiyaha ugu fiican " aad u adag in la helo jawaabaha sababtoo ah kuma koobna oo kaliya noocyada la xidhiidha laakiin sidoo kale waxay ka tarjumaysaa sida aad u sarayso aqoonta xirfadeed ee raadiyaha.
Waxaa laga yaabaa inaad gebi ahaanba ku wareerto qaybo ka mid ah waxa ku jira sida qiimaha SNR ee taxane summadaysan oo FM-ka ah, ama magacyada gaarka ah ee godadka isku dhafka FM, iwm.
Haddaba hagahan waxa uu ku baran doonaa luqadda ugu kooban ee ku saabsan sida loo dhiso idaacad dhammaystiran iyo qodobbada muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ka fiirsato, waxaanan wadaagi doonnaa qalabyo dheeraad ah oo kaa caawin doona inaad dhisto idaacad dhammaystiran.
Tallaabada #0 Waxyaabaha ay tahay inaad horay u ogaato
Dejinta idaacad uma fududa sida ay u muuqato. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tixgeliso waxa laga sii daayo barnaamijyada raadiyaha iyo inta kharash joogto ah oo laga yaabo inaad u baahan tahay inaad maalgashato. Si kastaba ha ahaatee, haddii idaacadaada ay si sax ah u shaqeyso, waxa kale oo aad heli kartaa dakhli wakhti dheer ah oo badan. Sidaa darteed, ka hor inta aan la dhisin idaacada ugu horreysa, waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto qodobbada muhiimka ah ee soo socda:
Tallaabada #1 Dib u eegis Siyaasadaha Deegaanka
Marka lagu daro barashada noocyada dhismaha ugu wanaagsan ee PF idaacad, fiiro gaar ah u yeelo oo hel siyaasadaha maamulka raadiyaha maxalliga ah (tusaale FCC ee USA) waqti ka dib waxay kaa caawin kartaa inaad ka fogaato ganaaxyo culus ee xadgudubyada waxayna kaa caawin kartaa inaad dejiso xeelado tartan oo ku habboon. kaas oo si dhow ula xidhiidha maalgashi badan oo soo socda, tusaale ahaan, kharashka shaqada, shatiga idaacada codsashada kharashka, kharashka biyaha iyo korontada, baahinta xogta kharashka tafatirka, ama kharashka wakhtiga, kharashka dadaalka, iwm.
Tallaabada #2 Dooro Xaruntaada Raadiyaha
Waxa laga yaabaa inay ku jahawareerto dadka cusub ee raadiyaha ku cusub noocyada ugu muhiimsan ee baahinta raadiyaha: AM, FM, TV, iyo IP. Laakiin way fududahay in la arko farqiga weyn ee u dhexeeya miisaaniyad-ururinta iyo qalabka looga baahan yahay afartan nooc ee baahinta. Haddaba, pls ahmiyad weyn siiya bilowgaba marka aad dooranayso nooca idaacada aad ku bilaabayso, is waydii: gabi ahaanba ma dabooli kartaa baahiyahaaga? Imisa miisaaniyad ayaa hadhay? Had iyo jeer xasuuso inaad tixgeliso nooca idaacada, waxay kaa caawinaysaa hawlgalka xasiloon ee xaruntaada laga yaabee dhowr iyo toban sano.
Tallaabada #3 Codso shatiga
Marka aad faham guud ka hesho agabka aad haysato, maxaad u qaadi wayday tallaabooyinka lagama maarmaanka ah? Codsashada shatiga ganacsiga ee maamulka raadiyaha awoodda leh ayaa ah tallaabada ugu muhiimsan ee dhismaha idaacadaha. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad fahamto kala duwanaanshaha idaacadaha kala duwan iyo inay shatiyadooda iska leeyihiin, oo aad dhammaan isu diyaariso ka hor inta aanad si rasmi ah u codsan shatiga - helitaanka oggolaanshaha kooxda FM waxay ahaan doontaa waqti dheer oo dhib badan.
Sidii hore loo sheegay, LPFM iyo HPFM waa laba nooc oo idaacadaha caadiga ah ee baahinta dhaqameed. Doorashada labadan hab midkood, LPFM ama HPFM, waxay si lama filaan ah ula kulmi doontaa dhibaatada ah sida loo ilaaliyo faa'iidada idaacadaha.
Haddii aad doorato saldhigga LPFM ee baahinta raadiyaha, uma diri kartid nooc kasta oo xayeysiis lacag ah dhagaystayaashaada (LPFM waa baahinta dhulka aan macaash doonka ahayn). Laakin idaacada Low Power FM waxa ay baahisaa barnaamijyo maqal ah oo kala duwan, oo ay ku jiraan muusig, warar, arrimaha bulshada, iwm.
Inkasta oo aanad samayn karin xayaysiis lacag ah, waxaad samayn kartaa qoraal hoosaad, taas oo kuu ogolaanaysa inaad aqbasho tabarucaadka shirkadda oo aad muujiso mahadnaqa deeqahaas inta lagu jiro baahinta. Sababtoo ah Baahinta Warbaahineed ee raadiyaha LPFM waa mid aad u xaddidan oo inta badan u muuqda qaab baahinta bulshada, Sidaa darteed, xeeladda faa'iidada gaarka ah waxay ku xiran tahay meesha ay joogaan dhageystayaashaada.
Haddii aad doorato idaacada HPFM, uma baahnid inaad ka walwasho baahinta xayaysiisyada lacag bixinta ah gabi ahaanba, sababtoo ah hawlahan ganacsi ee faa'iidada leh waxay aqbali karaan xayaysiisyada waxayna leeyihiin doorasho ballaaran oo xagga dhaqaalaha iyo barnaamijyada ah. Si kastaba ha ahaatee, aad ayay u adagtahay in lahelo shatiga ganacsiga ee idaacadaha HPFM waxayna caadiyan la socotaa kharashyo badan oo dalbashada.
Tallaabada #4 Jadwalka Arrimahaaga Raadiyaha
Haddii aad u gudbisay codsigaaga shatiga raadiyaha maamulka raadiyaha deegaanka, maxaad kale oo aad sameyn kartaa marka laga reebo sugitaanka ogolaanshaha?
Aan la wareegno arrimaha gudaha! FMUSER, idaacaduhu waa sida shirkad. Adiga oo ah qofka go'aaminaya "shirkaddan", waxaad la kulmi doontaa waxyaabo badan oo fudud oo ay ka mid yihiin waxa la baahinayo berri ama sida loo sameeyo caan ka mid ah idaacadaha.
Kuwa soo socda waa lix xeer oo wax ku ool ah oo ay soo koobtay FMUSER iyadoo loo eegayo jawaab celinta macaamiisha qaar ka mid ah idaacadaha iskood isu dhisay:
Tallaabada #5 Si sharci ah u shaqee oo ka fogow ciqaabaha culus
Qofna ma rabo in maamulka idaacadaha maxalliga ah lagu ciqaabo ciqaab sharci darro ah, gaar ahaan marka aad tobanaan kun oo doollar geliso kharashaadka iyo tamarta aan la soo koobi karin ee idaacadda, xitaa si toos ah uma joojin kartid ganacsigan!
Sidaa darteed, had iyo jeer xasuuso inaad codsato shatiga, diyaariso dhammaan waraaqaha u baahan ama loo baahan doono si loo gudbiyo, oo buuxi macluumaadka codsiga iyadoo la raacayo xaaladda dhabta ah si looga fogaado inay saameyn ku yeelato hawlgalka caafimaadka leh ee idaacadda.
Tallaabada #6 Had iyo jeer xasuuso inaad si macquul ah u maalgashato
Qorshaha dhismaha ee idaacada bilawga ah waxay u baahan tahay lacag badan (haddii aad had iyo jeer rabto in wax walba ay noqdaan heerka ugu sarreeya), oo ay ku jiraan qiimaha iibka ee qalabka baahinta xirfadlayaasha ah, kharashka kirada istuudiyaha raadiyaha, kharashka kiraynta bakhaarka, kharashka tamarta, kharashka mushaharka. iwm.
Arrimahan waxay u baahan yihiin in si taxadar leh looga fiirsado, Haddii mid ka mid ah arrimahan ay maqan yihiin, waxaa laga yaabaa inaad ku jirto dhibaato weyn, Sidaa darteed, helitaanka lammaanahaaga istaraatiijiyadeed ayaa ka sarreeya dhammaan gaar ahaan marxaladda bilowga ah ee dhismaha raadiyaha.
Dabcan, waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad kiraysato meel jira iyo qalab (sida munaaradda raadiyaha iyo istuudiyaha) ee baahinta FM-ka, waa xeelad weyn, laakiin laguma talinayo idaacad cusub oo la sameeyay sababtoo ah kharashka badan. Hagaag, doorashada adigaa iska leh!
Tallaabada #7 Isku dhafka kheyraadka oo dhis koox
Iibka qalabka baahinta ka sokow, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad meel dhigto oo dabcan, raadso qof qalabka isticmaala.
Ma doonaysaa inaad tan keligaa samayso? Sida cad tani waa wax aan macquul ahayn!
Waxaad u baahan doontaa farsamo yaqaan dayactirka qalabka baahinta; Waxa kale oo aad u baahan tahay khabiiro badan oo raadiyaha ah kuwaas oo mas'uul ka ah tafatirka barnaamijyada idaacadaha iyo shaqada goobta shaqada ee baahinta tooska ah, iwm. Markaa hel qaar ka mid ah hibada baahinta raadiyaha jadwalkaaga bilowga.
Tallaabada #8 Qorshe ganacsi oo gaar ah oo loogu talagalay raadiyahaaga
Maxaa kale oo aan u baahanahay inaan ogaado marka laga reebo kharashka dhismaha idaacada iyo siyaasadaha raadiyaha maxalliga ah? Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato inaad go'aansato sida loo sameeyo xarun warbaahineed oo dhab ah.
Ma xarun raadiye LPFM yar, qiimo jaban, laakiin faa'iido yar ayaa aad dhisaysaa ama xarun weyn oo ganacsi oo faa'iido badan leh / idaacada HPFM ama noocyada kale ee idaacadaha qorsheynta, go'aamadan waxay si dhow ula xiriiraan kharashkaaga, kuwaas oo sidoo kale waxay saameyn weyn ku yeelataa noocyada barnaamijka raadiyahaaga dhowrka sano ee soo socda.
Qaar ka mid ah arrimo dheeraad ah waa in sidoo kale la tixgeliyaa, sida:
- Dhulka ku xeeran idaacadaada, ma fidsan tahay ama ma tahay buuro, dhul fidsan ayaa u ogolaanaysa daboolida anteenada baahinta ee wanaagsan
- Ma waxaad dhisaysaa idaacad kulaylaha ah? Hadday haa tahay, markaa waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxyaabaha cimilada sida qoyaanka iyo heerkulka sare. Arrimahan ayaa laga yaabaa inay keenaan waxyaabo taban oo ay kordhiyaan kharashka ku biirinta dhismaha idaacadaada, gaar ahaan qiimaha xulashada qalabka idaacadaha ugu fiican.
- Sideen dib u eegis wanaagsan uga heli karaa barnaamijyada raadiyaha?
Waxaad la kulmi doontaa dhammaan noocyada dhibaatooyinka inta lagu jiro dhismaha raadiyaha. Waa caqli-xumo inaad kaligaa la dagaalanto, markaa waxaad u baahan tahay xoogaa wada shaqayn ah markan.
Nasiib wanaag, khabiir ahaan dhisidda idaacadaha xirfadleyda ah, FMUSER waxay siisaa xalal raadiye oo dhammaystiran oo furaha raadiyaha ah iyo qalabka idaacadaha raqiis ah ee iibsada raadiyaha miisaaniyad kasta.
Intaa waxaa dheer, taageerada waqtiga-dhabta ah ee khadka tooska ah ayaa sidoo kale la heli karaa, laga bilaabo qorsheynta qaab dhismeedka idaacadahaaga ilaa maaraynta tillaabo kasta oo yar oo loo baahan yahay in la qaado ka hor iyo ka dib dhismaha idaacadaha.
Ma waxaad raadinaysaa idaacado dhamaystiran iyo xidhmooyin qalab istuudiyo? La xidhiidh khubaradayada RF oo noo sheeg baahiyahaaga iyo miisaaniyadaada, oo hel mashruucii ugu dambeeyay ee habaynta idaacada FM ee xirfadlaha ah ee FMUSER Broadcast.
11 Qalabka Baahinta Muhiimka ah ee Idaacadda FM
#1 Qalabka isku xirka Gudbiyaha Studio
Tan waxaa ku jira nidaamka STL dhijitaalka ah (IP STL ama STL ee ka sarreeya IP) wuxuu ka kooban yahay cod-bixiyeyaal toos ah iyo qalab-dejiyayaal, anteenooyinkooda parabolic, beddelka shabakadda, iyo aaladaha kale sida koronto-dhaliyaha, khadadka gelinta maqalka iyo muuqaalka, iwm. Halka microwave STL uu ka kooban yahay anteenada STL, gudbiyaha STL&STL qaataha. Nidaamka STL waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro istuudiyahaaga goobta gudbinta wuxuuna hubiyaa tayada gudbinta maqalka.
# 2 Wariyeyaasha Idaacada FM
Qalab muhiim ah oo lagu dhisayo idaacad FM oo aasaasi ah, oo loo sameeyay in lagu farsameeyo calaamadaha FM loona diro anteenooyinka baahinta
#3 Nidaamka Anteenada Baahinta FM-ka
Oo ay ku jiraan anteenooyinka baahinta, khadadka anteenada, fiilooyinka coaxial, xirayaasha fiilooyinka, iyo qalabka kale ee anteenada. Nidaamka anteenada ayaa muhiim u ah sida gudbiyaasha FM-yada. Meelo badan oo anteeno ah ayaa la socota faa'iido anteeno dheeraad ah si loo gaaro gudbin waxtar badan leh
#4 FM Combiners ee Anteenada
Sababtoo ah qiimaha sare ee anteenooyinka badan iyo booska xaddidan ee munaaradda baahinta, isku-dariyaha FM wuxuu si weyn u dhimi karaa qiimaha nidaamka gudbinta FM isagoo ka qaadaya awoodda wax soo saarka cod-weyneeye oo isku dhejiya hal anteeno FM ah.
#5 Anteenada Waveguide fuuqbaxayaasha
Sidoo kale loo yaqaan kombaresarka hawada raadiyaha, waa qalab muhiim ah oo loo isticmaalo in lagu bixiyo hawo qalalan oo ciriiri ah xadhkaha gudbinta adag, taas oo inta badan lagu arko idaacadaha waaweyn.
# 6 Amplifiers FM Power
Loo isticmaalo in lagu soo qabto calaamadaha FM Exciter oo lagu ballaariyo awoodda si sharci ah aad u isticmaasho
#7 FM Stereo Generators
Hawlaha xoogga la saarayo hore iyo shaandhaynta hoose-dhexe, koronto-dhaliyaha FM-ka ayaa loo adeegsadaa nidaamka ka-hortagga maqalka FM-ka ee dibedda, si loo yareeyo saameynta isku-darka soo-dhoweynta ee ay sababtay waddo-badan oo loo wareejiyo AES MPX-ga isku-darka aasaasiga ah ee dhammaystiran ee kicinta. Si loo soo koobo, dhaliye stereo FM waa beddele heli kara calaamadaha(maqalka) una gudbiya qaabka bandband FM.
#8 Isku-dhafka Maqalka Isteeriyo
Qalabka beddelka ee loo isticmaalo in lagu beddelo codka stereo inta u dhaxaysa matoorada FM-stereo (haddii ay jiraan kuwo badan)
#9 FM Exciters
Aaladaha loo isticmaalo in lagu qabto calaamadaha maqalka ee FM Stereo Baseband ee ka soo jeeda FM Stereo Generator ama Combosite Stereo Audio Switcher
#10 Baahinta Anteenada Wareegyada
Aalad loo isticmaalo in lagu kala beddelo anteenooyinka baahinta ee lagu dabaqo qalabka kale ee baahinta wararka sida gudbiyaha raadiyaha iyo qaataha.
#11 Kontoroolka fogaanta RF
Aaladda wireless-ka si fudud loo maareeyo oo loo isticmaalo in lagu sii daayo tilmaamaha fog ee RF ee qalabka baahinta (looma baahna in si toos ah loo beegsado qalabka), oo lagu daray, haddii ay dhacdo nidaamyada anteenooyinka baahinta badan, waxay la socotaa nidaamka gudbinta RF waxayna bixisaa digniino marka nidaamka khaldamay.
6 Qalabka Caadiga ah ee kaabta ee ku yaal Xarunta Raadiyaha FM
si aad u siiso hawo qabow qalabka iyo dabcan waayo-aragnimada raadiyaha ugu fiican ee martidaada (gaar ahaan qolka istuudiyaha iyo qolka injineernimada).
Loo yaqaan sahay koronto aan kala goyn karin (UPS), kani waa nooc ka mid ah qalabka korantada ee loo isticmaalo in lagu ilaaliyo qalabka qalabka idaacadaha marka ay korontadu shil u go'do. Si taas loo gaaro, UPS waxay bixisaa awood degdeg ah oo ku filan waxaana lagu dabaqi karaa oo keliya meel yar sida xafiis laakiin sidoo kale aag weyn oo duleedka ah. Wakhtiga caadiga ah ee UPS wuxuu ahaan doonaa oo kaliya dhowr daqiiqo (ku salaysan awoodda wax soo saarka), laakiin aad ayey ugu filan tahay dayactirka farsamada koronto-dhaliyaha.
3. Koronto dhaliyaha
Qayb ka mid ah qalabka loo isticmaalo in lagu soo saaro koronto oo laga beddelay tamar makaanik iyo sahayda idaacadda
4. Alaabta guriga
Si loo siiyo meel banaan oo loogu talagalay codsiyada kala duwan, tusaale ahaan booska miiska loogu talagalay gelinta qalabka baahinta istuudiyaha sida makarafoonka iyo habka maqalka, meel bannaan oo loogu talagalay martida raadiyaha, iwm.
5. Qalabka hawada
waxaa ka mid ah iftiinka hawada iyo saacada hawada. Istuudiyaha raadiyaha khabiirka ah, nalka hawadu waa aalad digniinta iftiinka ah oo lagu dhejin karo gidaarka, inta badan loo isticmaalo in lagu dareensiiyo dadka si aan ula kac ahayn u jebin kara meelaha aad si toos ah uga tebinayso tabinta (oo si kadis ah u burburisa qorshayaashaada ).
Dabcan, sidoo kale waa aalad muhiim ah si ay u muujiso xirfadaada rugtaada iyo in qof walba xasuusiyo inuu ku aamuso goobta baahinta tooska ah. halka saacada hawadu ay tahay qayb xog ah oo xasuusinaysa hawlaha qalabka iyadoo la soo bandhigayo wakhtiga iyo taariikhda, saacada tirinta, joojinta xayaysiiska, iwm.
6. Studio Acoustic Wedges Xumbo
Xumbo xumbo ah oo laga sameeyay polyurethane/polyether/polyester oo la jarjaray qaabka cuboid, oo inta badan loo isticmaalo ilaalinta dhawaqa ee istuudiyaha raadiyaha iyada oo la yareynayo mowjadaha dhawaaqa hawadu qaado, taas oo yaraynaysa ballaadhintooda si ay u xakameeyaan dhawaaqyada.
3 Inta badan Software-ka lagu isticmaalo Istuudiye Raadiyaha FM
1. Software Processing Content Audio
Tusaale ahaan, software-ka automation-ka ee qolo saddexaad iyo playout loo isticmaalo habaynta maqalka: podcasts-yada, isku-darka calaamadaha maqalka, sinnaanta maqalka, iyo isku-buufinta maqalka, iwm.)
2. Software-ka Jadwalka baahinta tooska ah
Inta badan lagu dabaqi karo 24/7 baahinta tooska ah.
3. Software Streaming Audio
Software-kan waxaa loo isticmaali doonaa marka aad rabto inaad si dhab ah u dhex gasho ama aad si toos ah u baahiso dhammaan barnaamijyada.
Waa maxay baahinta iyo sida ay u shaqeyso?
Weli ma isticmaashaa raadiyaha? Hadii aad ku nooshahay qaar ka mid ah meelaha horumaray, aaladaha casriga ah ee casriga ah sida mobilada iyo kombayutarada waxa ay noqdeen qaar ka mid ah nolol maalmeedka, laakiin meelaha qaar ee aan horumarsaneyn, qalabka baahinta sida FM-yada qaata, ayaa muhiim u ah sida cuntada oo kale.
Waxay la macno tahay SABAB qof, laakiin jawaabta aad u fudud ayaa ah: Waddamada iyo gobollada leh kaabayaasha dib u dhaca, heerka noloshu waa xaddidan yahay, raadiyahana waa habka kaliya ee maaweelada. Waddamadaas iyo gobolladaas aan horumarka lahayn, isticmaalka raadiyaha ayaa weli leh faa'iidooyin badan, tusaale ahaan, raadiyaha wuxuu u shaqeeyaa sida war-baahineed oo leh kharashka ugu hooseeya, sidoo kale waa habka madadaalada ee ugu badan ee soo jiidata daawadayaasha ugu badan.
Intaa waxaa dheer, raadiyaha waa mid ka mid ah kanaalada gudbinta macluumaadka ugu wanaagsan ee leh tayada sare iyo hufnaanta xakamaynta ee ka hortagga faafa ee COVID-19. Warfidiyayaasha magaalada ama idaacadaha bulshada ayaa awood u leh inay ku baahiyaan macluumaadka ka hortagga faafitaanka cudurka iyagoo adeegsanaya luqadda maxalliga ah, taasoo ka caawisa dadka maxalliga ah inay bartaan COVID-19 "Sidee iyo Sababta" oo ay kalsooni ugu kordhiso dhageystayaasha iyadoo loo marayo habkan isgaarsiineed ee dhaqameed ee ugu deegaan.
Raadiyaha waa qayb yar oo ka mid ah baahinta wireless-ka, waxa ugu muhiimsan waa raadiyaha - sida goobta gudbinta calaamadaha. COVID-19 wuu sii xumaanayaa, baahinta raadiyaha bulshada, baahinta raadiyaha magaalada, iyo adeegyada baahinta raadiyaha ee aan lala xiriirin sida kaniisadaha lagu wado iyo masraxyada lagu wado ayaa noqday mid ka mid ah noocyada madadaalada ugu badbaadsan ee wadamada horumaray iyo kuwa horumaray. "Waxaan samayn karnaa wax ka badan in aan ku tukanno agagaarka."
Raadiyaha guud ee raadiyaha - oo uu hoggaamiyo LPFM (yar&gaar ah) baahinta, oo ay ku jiraan baahinta HPFM (weyn & ganacsi), baahinta AM (wali la isticmaalo), baahinta TV-ga (aad u qaali ah)
Raadiyaha cusub - oo uu hoggaamiyo baahinta dhijitaalka ah (IP studio), waa warbaahin soo ifbaxaysa baahinta internetka.
Hal shay ayaa hubaal ah in idaacadaha ka socda wadamada horumaray iyo meelaha: idaacada khabiirka ah, oo leh kharashyo badan oo qalab ah ayaa had iyo jeer ka dhigaya heer xirfadeed sare oo idaacadeed.
Tani miyay si la mid ah u shaqeysaa wadamada iyo meelaha aan horumarsaneyn? Dhab ahaantii MA. Waxaan leenahay macaamiil badan oo ka yimid wadamada iyo meelaha aan horumarsaneyn. Qalabka idaacadaha aasaasiga ah sida gudbiyaha raadiyaha FM-ta oo hooseeya, anteenooyin badan oo baahin ah, qalabyada anteenada, iyo xirmooyinka qalabka istuudiyow, iwm. ayaa ah dhammaan waxa la weydiiyo bilowga baahinta raadiyaha. Macaamiishan guud ahaan waxay ka kala yimaaddaan bulshooyinka ku nool magaalooyinka yaryar qaarkood, waxay idaacadaha ka sii daayaan magaalooyinka ama bulshooyinka deriska ah ee u dhow idaacaddooda. Waxa ay sumcad weyn ku heleen baahinta idaacadaha maxalliga ah oo wata qalab idaacadeed oo ku kacaya tobanaan kun oo USD, taas oo aad uga yar waxa ku qornaa qorshahooda shaqo ee idaacadaha.
Haddaba, heerka xirfadeed ee idaacada ay baahinayso macneheedu maaha mid aad u badan dhageystayaasha gudaha. Maxaa loola jeedaa haddaba? - Waxaa jira barnaamijyo raadiyaha oo la sii daayo, dadkuna waxay ku dhageysan karaan soo-dhoweeyaha raadiyaha macnaheedu waa wax badan.
Qaar ka mid ah macaamiisha wadamada horumaray waxay leeyihiin miisaaniyad sare waxayna aadaan tayada badeecada ugu fiican. Waxay doorbidaan xalalka furaha raadiyaha oo dhammaystiran oo qiimo sare leh, iyo qalabka baahinta ee ku jira waxaa lagu dabaqi karaa idaacadaha waaweyn qaarkood, sida idaacadaha magaalada qaarkood ama idaacadaha gobolka.
Haddii aad leedahay miisaaniyad yar oo aad u baahan tahay inaad daboosho dhawr mayl, qalabka baahinta raadiyaha LPFM ayaa si fiican u dabooli kara baahiyahaaga; Haddii aad haysato miisaaniyad ku filan oo aad rabto inaad kordhiso caymiskaaga ilaa tobanaan mayl, idaacadaha HPFM waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan.
3 Noocyo Muhiim ah oo ah Qalabka Idaacadda FM
Raadiyaha FM-ta, liiska hubinta qalabka idaacad FM oo dhameystiran waxaa ku jira saddex nooc oo aasaasi ah oo qalabka baahinta ah:
#1 Qalabka Kobcinta Guud
Aaladaha sida qaboojiyaha, marawaxadaha, ama alaabta guriga sida miisaska iyo kuraasta
#2 Gudbinta FM Qalabka
Intooda badan waxay codsadeen qolka injineernimada raadiyaha ee baahinta raadiyaha ee isticmaalayaasha dhamaadka ah.
#3 Qalabka Studio FM
- Inta badan waxaa laga codsadaa istuudiyaha raadiyaha sida qalabaynta maqalka ee dhamaadka-hore
- Inta badan laga codsado istuudiyaha raadiyaha si loo geliyo calaamadaha maqalka ee barnaamijyada raadiyaha ee ay bixiyaan martigeliyaha ama martida.
Haddii aad rabto inaad ku baahiso barnaamijyo maqal ah oo tayo sare leh oo ku saabsan soo noqnoqda raadiyaha, markaa haysashada qalabka ugu wanaagsan ee raadiyaha ayaa wali lagama maarmaan ah.
Ha iloobin waxqabadka alaabta iyo iibsashada macluumaadka la xidhiidha kharashka. Waxa ugu muhiimsan waa baahinta raadiyaha sharciga ah, kaas oo u baahan in lagu shaqeeyo xeerar ay dejiyeen maamulka idaacadaha maxalliga ah, sida ogolaanshaha raadiyaha ama shuruudaha band baahinta. Idaacadda aasaasiga ah ee LPFM waxay u baahan kartaa qalab baahinta magacyo waaweyn oo ka yar marka loo eego idaacada FM-ta ganacsiga ah (sababta oo leh qiime sare), laakiin sidaas oo ay tahay, abuurista liiska hubinta qalabka baahinta oo dhammaystiran ayaa weli macneheedu yahay nooc kasta oo raadiyaha, kaas oo sidoo kale u shaqeeya AM iyo baahinta raadiyaha Dijital ah.
Qalabkee ayaan u baahanahay si aan u bilaabo idaacada FM?
#1 Qalabka Gudbinta FM
- Wariyayaasha FM-ka
- Nidaamka Anteenooyinka FM (Anteenooyinka raadiyaha FM-ka ee leh qalabyada sida fiilooyinka)
- Qalabka Isku-xirka Gudbinta Studio-ga ( gudbiyaasha STL, qaatayaasha STL, anteenooyinka STL)
#2 Qalabka Habaynta Maqalka
- Processor makarafoonka
- Processor-ka maqalka
- USB Mixer Console
- Kaarka dhawaaqa USB-ga ee dibedda (haddii aad rabto inaad sameyso baahinta tooska ah ama duubista tooska ah)
- Guddiga Kartida
- Gudida badhanka (GPIO-Ujeedada Guud Gelida/Wax soo saarka)
#3 Qalabka Gelida Maqalka
- Qaybiyaha sameecadaha
- Boom Cudud
- Shaandhaynta Pop
- Makarafoonada Taagan (Miic Arms)
- Baahinta muraayadda dabaysha
- Kormeerayaasha Af-hayeennada firfircoon
- La soco maqalka
- Kormeerayaasha Goobta u dhow
- Mitirrada Heerka Codka
- Ciyaartoyga CD
- Ku-hadlayaal (Tilmaan/fiiri Af-hayeenka & Ku-hadlayaasha Kormeerayaasha Studio)
#4 Qalabka Martida
- Aaladda Isgaadhsiinta Raadiyaha: oo sidoo kale loo yaqaanno intercom-ka raadiyaha ama interphone-ka raadiyaha, waa aalad isgaarsiineed oo loo isticmaalo nidaamka shabakad taleefoon oo ku tiirsan xarunta raadiyaha.
- Qalabka wacitaanka tooska ah: waxaa loo isticmaali jiray wicitaanada tooska ah ee Phone ama GSM, waxa kale oo loo yaqaan Phone Talkback System
- Kaydka maqalka: CD Players, DAT Machines, Mini Disk Players, and Turn Tables, etc.
- Qalabka Soo Gelida Maqalka: Makarafoonada, Sameecado-gacmeedka iyo Filter-yada Pop, iwm.
#5 Qalabka qolka rack
- Computer: loo isticmaalo in lagu soo diro tilmaamo kontorool oo sax ah iyo in la hubiyo hawlgalka xasiloon oo badbaado leh ee qalabka idaacada, inta badan wuxuu u adeegaa qaab seerfar ku rakiban idaacada FM
- Hard disk-ga loogu talagalay kaydinta maqalka: Aalad adag oo lagu kaydiyo xarumaha raadiyaha ee loo isticmaalo kala soocida ama habaynta ama alaabta maqalka ah ee diyaarka u ah baahinta, talooyinka: had iyo jeer xasuusnoow in aad haysato muraayadda muraayadda ee darawalkaaga. Kaydinta muraayaddu waa mid ka mid ah hababka kaydinta ugu habboon uguna dhakhsaha badan. Markaad ka tirtirto feylka isha, faylka ayaa ugu dambeyntii lagu tirtiri doonaa kaydinta muraayadda oo looma baahna in la cadaadiyo wax kasta (maxaa yeelay muraayadda muraayaddu dhab ahaantii waa nuqul sax ah dhammaan waxyaabaha ku jira kombiyuutarka)
- KVM KordhiyeKVM fidiyaha waxaa loo yaqaanaa KVM Switches, PC Switches, Server Switches, iyo CPU Switches, halka KVM ay u taagan tahay kiiboodhka, muqaalka, iyo jiirka. Waxay u shaqeysaa si ay u qabato calaamadaha soo gelida durugsan, ka dib waxay awood u siineysaa isticmaalayaasha inay xakameeyaan 2 ama xitaa ka badan kombuyuutar oo wata hal kiibood oo keliya iyo mouse. Fidiyaha KVM wuxuu caawiyaa dhimista jahawareerka ay sababto meel bannaan oo miiska ah oo aan ku filneyn sababtoo ah isticmaalka isku mar ee kumbuyuutarrada badan iyo kormeerayaasha isticmaalaha ugu dambeeya.
- Matoorka Mix AudioQalabka isku-dhafka maqalka ah ee loo isticmaalo in lagu bixiyo la-socod dhammaystiran oo ku saabsan dhammaan amarrada nidaamka-ballaaran (xarunta isgaarsiinta ee dhammaan meelaha ku-saleysan IP-ga). Noocyada ugu caansan waxay leeyihiin dhowr IP, maqal, fiilo koronto ah, iyo hawlo isku darka iyo isku dhafka ah.
- Router Audio: waa qalab qaadasho iyo beddelaad maqal ah oo keenaya gelinta maqalka qalab gaar ah una beddela soo-saar maqal sax ah.
- Maqalka I/O Node: Habka loo sameeyo safar wareeg ah oo loogu talagalay calaamadaha analoogga ama AES waxay u wareejinayaan xirmooyinka IP, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku habeyso marin-u-socodka shabakad ku salaysan shabakad iyada oo loo marayo waxyaabo badan iyo wax soo saar (nodes-yada intooda badani waxay leeyihiin).
- Studiohub: inta badan waxay tixraacdaa heerka xargaha ee Studiohub ee isku xirka analoogga iyo maqalka AES ee korka xirayaasha maqalka ee RJ-45 ama RJ45 ilaa fiilooyinka maqalka ee dheellitiran/aan dheellitirneyn. PS: "RJ" ee ku jira RJ45 waa soo gaabinta Jack Registered, taas oo ah calaamad muujinaysa asal ahaan laga helay horraantii 1970-meeyadii ee is-dhexgalka taleefoonka ee USOC (Universal Service Codeing Code) ee nidaamka Bell
- Network Patch Bay: aaladda fiilooyinka adeegsata fiilooyinka si ay isugu xidhaan kombuyuutarrada shabakadda ee shabakadda aagga deegaanka oo ay ku xidhaan khadadka dibadda oo ay ku jiraan internetka ama shabakadaha kale ee ballaadhan (WAN). Sida qalab loo isticmaalo sidii goob-wareejin joogto ah, Network Patch Panel waxa loo isticmaali karaa in la isku xidho oo la maareeyo fiilooyinka fiber optic-ga oo lagu xidho dhammaan aaladaha iyada oo loo marayo Shabakadda Patch Panel iyo fiilooyinka Cat6. Qalabka balastarku wuxuu ku siin karaa maareyn fudud oo sax ah shabakada, dabacsanaantiisa weyna waxay yaraynaysaa dhibka dayactirka cilladaha farsamada: marka nuxurka loo baahan yahay in la beddelo ama uu ku guuldareysto inuu u baahan yahay in la hagaajiyo, looma baahna in dib loo habeeyo ama la dhaqaajiyo mid kasta. qalabka, iyo hagaajin farsamo sidoo kale si fudud ayaa loo gaari karaa.
- Cable Audio Cable: khadka isku xirka maqalka ee loo isticmaalo in lagu wareejiyo calaamadaha maqalka (analog/dijital) laga bilaabo isha maqalka ilaa dhamaadka helitaanka sida afhayeenka. Fiilooyinka inta badan la isticmaalo waa fiilooyinka analooga ah ee RCA, kuwaas oo sidoo kale loo yaqaan jack, cinch, iyo coaxial (asal ahaan loogu magac daray iyada oo ku saleysan dhismooyinkooda ama isku xirayaasha beddelka noocyada)
- Block-down Block: Aaladda joojinta fiilooyinka, halka fiilooyinka lagu xiro boosaska gaarka ah, waxay ku badan tahay isgaarsiinta, laakiin sidoo kale wax badan ayaa laga helaa xarumaha baahinta hore.)
- Shabakadda Wareejinta: block maarayn muhiim ah (ikhtiyaar ah oo ka mid ah qalabka ku salaysan hardware ee maaraynta shabakadaha jireed ama software loogu talagalay maaraynta farsamada) loo isticmaalo isku xirka aaladaha shabakado badan sida kombuyuutar, iyo qaar ka mid ah aaladaha internetka (IoT) sida raadraacayaasha alaabada wireless. . Beddelka shabakadu wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan router-ka shabakada: wuxuu u soo diraa baakidh xogeed inta u dhaxaysa aaladaha halkii uu u diri lahaa shabakadaha, kaas oo awood u siinaya wada xidhiidhinta macluumaadka u dhexeeya aaladaha ku xidhan. Intaa waxaa dheer, isticmaalka furaha shabakadu waxa uu caawiyaa maaraynta taraafikada soo galaya ama ka baxaya isku xidhka waxayna ilaalisaa calaamadaha korantada kuwo aan leexleexan, iwm.
- Router Network: ama albaabka caadiga ah, oo loo yaqaan qalabka beddelka inta badan loo isticmaalo gelitaanka internetka: si loo diro loona helo xirmooyinka xogta shabakadaha kombayutarka iyadoo la adeegsanayo xiriir toos ah modem iyada oo loo marayo fiilooyinka fiilada, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa isku xirka shabakadaha ama isku xirka VPN. Router-ka shabakadu wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan kan Network Switch: wuxuu u soo diraa xirmooyinka xogta shabakadaha halkii uu u diri lahaa aaladaha dhexdooda, kaas oo gacan ka geysanaya doorashada dariiqa ugu fiican ee "safarka sixirka" ee wadaaga macluumaadka (shakhsi & ganacsi) ee u dhexeeya shabakadaha kombiyuutarada caalamiga ah, iyo Dabcan, si xogta looga ilaaliyo jabsiga IT, hanjabaada, iwm.
- Processor Maqalka Gudbinta Hawada: qayb ka mid ah qalabka farsamaynta maqalka ee dhawr-band ah oo lagu rakibay gudbiye ballaadhan oo raadiyaha ee xarun raadiye, inta badan loo isticmaalo in lagu maareeyo habaynta ugu sarreysa gudbiyaha iyadoo la kontoroolo gooyeeyaha (bass clipper iyo master clipper) iyo Digital MPX Stereo Generator. Maqalka FM-ka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa kor u qaadida gelinta maqalka, tusaale ahaan, habaynta codka hawada waxa ay u samayn kartaa cod saxeex gaar ah idaacadaha ganacsiga.
- Codeeyaha RDS: qalab gudbin kara calaamadaha raadiyaha FM, calaamadaha RDS (xogta dhijitaalka ah) sida macluumaadka astaanta, macluumaadka barnaamijka maqalka, iyo macluumaadka kale ee idaacadda. RDS waxaa laga soo gaabiyaa nidaamka xogta raadiyaha, taasoo tixraacaysa heerka isgaarsiineed ee Midowga Warbaahinta Yurub (EBU), halbeeggani wuxuu abuuray heer sare oo tayada calaamadaha iyo nadiifnimada muuqaalka ah ee gudbinta FM-ka ee idaacada FM, wuxuuna sidoo kale abuuraa si buuxda jawiga dhijitaalka ah ee hawlwadeenada idaacadaha.
- Qalabka Isku-dhafka ah ee TaleefankaIsku-dhafka taleefanka waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu duubo ama lagu baahiyo wada sheekeysiga u dhexeeya soo wacaha iyo soo-jeediyaha ama loo isticmaalo kuwa soo wacaya ama wariyeyaasha si toos ah baahinta raadiyaha. Qalabka Isku-dhafka Taleefanka waxaa loo yaqaannaa isku-dhafka taleefanka baahinta ama unugga dheelitirka taleefanka ama fargeeto taleefanka, kaas oo bixiya is-dhexgal u dhexeeya khadka taleefanka caadiga ah iyo console isku-darka ah oo u beddela inta u dhexeysa qaababka laba-fiil iyo afar-fire ee waddooyinka maqalka ah ee laba jiho. Isticmaalka qalabka Hybrid ee Telefoonku wuxuu xaqiiqsadaa isbeddel sahlan oo u dhexeeya telefoonka iyo qalabka isku dhafan, sidaas darteed waa mid aad ugu habboon in lagu isticmaalo goobta, ka sokow, waxay sidoo kale yareyn kartaa ma aha oo kaliya qiimaha wicitaanka, laakiin sidoo kale khatarta telefoonka VoIP iyo telefoonada analogga ah, iyo in la abuuro maamul hufan xitaa wakhtiga ugu badan ee load.
- PABE (Isweydaarsiga Laamaha Tooska ah ee Gaarka ah): hab toos ah oo talefoonka lagu beddelo oo ay maamulaan hay'ado gaar ah, kaas oo loo dhisay in uu daboolo baahida khadadka badan ee wicitaannada guriga iyo dibaddaba. PABE waxaa laga soo gaabiyaa laanta isdhaafsiga tooska ah ee gaarka loo leeyahay, waa mid ka mid ah xalalka gaarka ah ee loo baahan yahay idaacadaha. PABE waxay ogolaatay dhimista kharashka isticmaalka shabakadaha telefoonada dadweynaha sababtoo ah wicitaanada gudaha waxaa lagu dhejin karaa lacag la'aan iyada oo la adeegsanayo dhowr khad telefoon oo dadweynaha ah. PABE waxay sidoo kale wanaajisaa isgaarsiinta gudaha gudaha xarunta raadiyaha, iyadoo badhamada la sameeyay si loo riixo si fudud ayaa midba midka kale uga waci karaa gudaha.
- Soo-dhawrka FM-ta ee hawada ka maqanHabka raadiyaha FM-ka oo inta badan lagu arko idaacadaha pro iyo maamulka sharciyeynta, kaas oo loo isticmaalo in lagu kormeero calaamada inta lagu jiro barnaamijka raadiyaha ama in lagu bixiyo quudin maqal ah oo tayo sare leh oo loogu talagalay qaybinta barnaamijka dhammaan xarumaha baahinta oo leh analoog la hagaajin karo iyo AES digital. wax soo saarka maqalka. Isticmaalka qaataha hawada ka baxsan waxa ay hoos u dhigtaa qiimaha la socodka kala goonida ah ee idaacadaha badan, waxayna siday u kala horreeyaan kordhiya tayada iyo sii wadida la socodka joogtada ah.
- Nidaamka la socodka: qalabku waxa uu ku shaqeeyaa la socodka iyo cabbirka raadiyaha FM, kaas oo awood u siinaya soo noqnoqda FM-ka calaamadaha badan in la soo saaro oo lagu kala wareejiyo aaladaha kala duwan ee leh shaandheynta dhijitaalka ah ee ku dhex jirta. Kormeeraha Modulation-ka wanaagsan / Falanqeeyaha FM wuxuu badiyaa oggolaadaa Isku-xirnaanta GSM iyada oo loo marayo Modem-ka GSM-ka ee dibadda ee ikhtiyaarka ah, si aad si fudud ula socoto heerka kanaalka ama aad uga hesho calaamadaha maqalka taleefankaaga gacanta wakhti kasta iyo meel kasta.
- Rack Server: qaab-dhismeed meel xiran oo bir lagu sameeyay oo loo isticmaalo in lagu kaydiyo, qalabka baahinta ee in ka badan 6 unug (oo laga dooranayo 1-8 unug). Kaydka server-ka waa la isku dhejin karaa ama la dheerayn karaa sababtoo ah badqabkiisa, iyo noocyada ugu badan ee kaydka server-ka waa 1U, 2U, iyo 4U (8U waa ikhtiyaari laakiin aan la arki karin), idaacada weyn, 19 inch kiis u adeega waa rack. qaabka ugu habboon ee qalabka rack. Isticmaalka kaydiyaha server-ka wuxuu caawiyaa dhimista isticmaalka booska sagxadda qalabka baahinta raadiyaha, fududaynta fiilooyinka qalabka iyo dayactirka farsamada, isku dhafka kheyraadka xaddidan ee meelaha yar yar, tusaale ahaan, in la dhexdhexaadiyo socodka hawada qaboojinta, abaabulo meel gudaha ah oo la ballaarin karo Maaraynta isku dhafan ee ka fiican oo sahlan, iwm
- Codka maqalka IP: qalab maqal ah oo loo isticmaalo is-beddelka calaamadaha maqalka (analog to digital), codaynta maqalka, iyo kaydinta. Calaamadaha maqalka waxaa loo diri doonaa labada shabakadood ee IP (xadhkaha fidsan) iyo shabakadaha ballaadhan ee wireless-ka ah (3G, 3.5G, iyo 4G) ee codecs maqalka ee IP kuwaas oo adeegsada algorithms-ga dhawaaqa. Codka maqalka IP-ga waxaa inta badan lagu dabaqaa qaybinta fogaanta iyo gudbinta calaamadaha maqalka ee tayada sare leh, tusaale ahaan, baahinta maqalka fog ee IP-ga iyo qaybinta maqalka ee isku xirka STL ee badan (studio-ga xiriirinta gudbinta ama isku xirka STL) ama shabakadaha/ saldhigyada/ xidhiidhada/studios.
- Baahinta Satelite-ka qaataha: qayb ka mid ah qalabka baahinta raadiyaha ee loo isticmaalo helitaanka barnaamijka maqalka ee dayax-gacmeedka, iyo maqalka qaybinta mid-ilaa-badan iyada oo loo marayo shabakada isgaarsiinta satellite-ka, signalka raadiyaha, anteenada FM-ka ee dibadda, iyo xarunta baahinta. Qaadaha dayax-gacmeedka waxaa caadi ahaan loo arkaa mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee codsiyada qaybinta maqalka, oo leh noocyo loo qaybiyay HD qaataha, qaataha guud, qaataha dhijitaalka ah ee duubaha, iyo qaataha kanaalka sir ah. Isticmaalka aqbalayaasha stateliite waxay garwaaqsanayaan wax-ku-oolnimada baahin maqal oo tayo sare leh.
- DAB+/DRM/HD Codeeyaha Raadiyaha: qalab codeed qalab ah oo loo isticmaalo in lagu gudbiyo AES ama socodka maqalka analoogga ee habka saxda ah ee gaadiidka ee goobta DAB +, DRM, iyo HD gaadiidka baahinta raadiyaha. Qalab codeeyaha waxaa loogu talagalay sanduuq yar oo la qaadi karo, si ka sii fiican ayuu u shaqeeyaa wuxuuna leeyahay qiime iibsi ka hooseeya kan kombuterka furan ee il furan. PS: DAB+ waa halbeeg baahinta raadiyaha cusub ee Baahinta Maqalka Dijital ah ee laga isticmaalo waddamo iyo gobollo badan, asal ahaan waxaa qeexay Madasha WorldDAB. DAB+ waxay u shaqeysaa si aan waafaqsanayn DAB, taasoo la macno ah qaataha DAB ma heli karo DAB+ baahinta raadiyaha. Marka la eego hufnaanta isticmaalka spectrum raadiyaha, DAB way ka fiican tahay baahinta FM-ta analogga ah, DAB waxay ku siin kartaa adeegyo badan oo raadiyaha isla bandwidth la siiyo, waayo waxay inta badan u isticmaashaa spectrum si wax ku ool ah waxayna ka xoog badan tahay dhawaaqa dhageysiga mobilada iyo dariiqyada badan ee sii libdha marka loo eego FM analog baahinta, in kasta oo FM-ku bixiso aag ballaadhan, haddana calaamadaha raadiyaha ayaa daciifaya sidoo kale. Heerarka raadiyaha dhijitaalka ah ee dhulka kale ee caalamiga ah waxaa ka mid ah HD Radio (Mexico & the US), ISDB TB (Japan), DRM (Digital Radio Mondiale), CDR (Shiinaha), iyo DMB ee la xiriira. Ku saabsan DMB: waxay tixraacaysaa "Radio Digital Mondiale", halka Mondiale uu tixraacayo "caalami" af Talyaani iyo Faransiis. DRM waa teknoolojiyadda baahinta maqalka dhijitaalka ah ee loo isticmaalo band-yada soo noqnoqda ee ka shaqeeya baahinta raadiyaha analogga ah sida AM, mowjadaha gaaban, iyo FM.
- Audio Patch Bay: xarun wareejinta fiilooyinka loo isticmaalo in lagu meeleeyo agabka iyo wax soo saarka qaybaha kala duwan ee qalabka maqalka. Qalabka dhegta ee maqalka ah ayaa inta badan lagu dhejiyaa server-ka qolka rack radio, kaas oo u oggolaanaya xaalad dayactir farsamo oo wanaagsan iyo maaraynta qalabka ku habboon (looma baahna in la dhaqaajiyo si loogu dhejiyo marar badan) iyada oo loo marayo calaamadaha maqalka ah ee dib u habeynta, tan ugu muhiimsan, waxay hoos u dhigtaa Qiimaha beddelka qalabka: ka-saarid yar iyo fur-furid waxay ku dhowdahay inay iska ilaaliso xidhashada iyo jeexjeexidda is-dhexgalka qalabka, taas oo macnaheedu yahay rajada nolosha alaabta oo dheer. Waxaa jira saddex nooc oo asaasi ah oo ah patch bay, kuwaas oo isbarbar socda, patch bay nus-caadi ah, iyo patch bay caadi ah, badi dhegaha dhagaha ee maqalku waxa ay ka kooban yihiin saro is-dhexgalyo ah oo loo isticmaalo wax-gelinta maqalka iyo wax-soo-saarka, halka ay laba saf yihiin. xagga dambe, iyo laba saf oo hore. Qalabka dhageysiga maqalka ah waxaa lagu dabaqi karaa qalab kale oo maqal ah sida qalabeeyaha maqalka, isku-darka maqalka, iwm.
- Aamusnaanta "Hawada Dhimatay" Qalabka lagu ogaado: Aalad ogaan karta xaaladda hawada dhimatay, koontaroolaysa heerka dhawaaqa cod-gelinta ee idaacadaha, oo ku soo diri kara digniin aamusnaan ah iimaylka, SNMP, ama soo-saarka indhaha-gacanta. Dareeraha aamusnaanta ayaa inta badan lagu arkaa idaacadaha xirfadlayaasha ah iyo xarumaha TV-ga waxaana si fudud loogu adeegsan karaa qalabka kale ee baahinta. Ku saabsan hawada dhintay: hawada dhintay waxaa loola jeedaa hakad aan ku tala-gal ahayn (badanaa dhawaaqa ka maqan) ama muddada aamusnaanta ee baahinta warbaahinta iyada oo aan lahayn signal, maqal, ama muuqaal ah ayaa la kala qaadaa inta badan sababtoo ah qalab xun ama qalad hawlwadeen ama sababo farsamo awgeed. Radio hawada dhintay waxaa laga yaabaa in loo arko waxa ugu xumaa ee abid la filayo gaar ahaan idaacadaha khubarada baahinta. Milkiilaha saldhigga, hawada dhintay waxay u keeni kartaa khasaare aad u badan dhinacyo badan, tusaale ahaan, luminta dakhliga xayaysiisyada ee la kafaalo qaaday iyo dhageystayaasha internetka. Bedelka Waftiga (si loogu kala beddelo istuudiyaha iyo ilaha kale ee maqalka, xulashada waxa hawada sii baxaya)
- Daahitaanka baahinta: waa aalad ay baahinta u adeegsadaan dib u dhigista calaamadaha baahinta si ay uga hortagaan khaladaadka ama waxyaabaha aan la aqbali karin in la sii daayo sida hindhisada, qufaca, ama faallo gaaban oo looga baahan yahay daadiyaha. waqti (laga bilaabo nus daqiiqo ilaa xitaa dhowr saacadood oo dheeraad ah) baahinta si ay faafreeb ugu sameeyaan codka (iyo muuqaalka) aflagaadada ama waxyaabaha kale ee aan u qalmin baahinta, oo ay hal mar ka saaraan haddii ay dhacdo saameyn xun. Daahitaanka baahinta waxaa inta badan lagu arkaa baahinta raadiyaha iyo baahinta TV-ga, sida ciyaaraha tooska ah, iwm.
Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Ilaaliso Xarunta Raadiyaha FM?
Sida loo ilaaliyo qalabkaas qaaliga ah ee baahinta idaacada FM? Maamulaha idaacadaha, dhaawac kasta oo soo gaara qalabka waxay la macno tahay in kharashka dayactirka dheeraadka ah la bixiyo. Markaa, si aad u ilaaliso horumarka waara ee caafimaadka qaba iyo dabcan inaad hoos u dhigto kharashkaaga, waa in la ilaaliyaa/la hubiyaa qalabkaas toddobaadle, saddexdii biloodle, ama sannadkiiba xarun warbaahineed.
Adigoo taxaya macluumaadka tixraaca ee dhabta ah sida mabaadi'da shaqo ee qalabka aasaasiga ah iyo heerarka, saamigani wuxuu ku siin karaa khibrad dayactir oo faa'iido leh iyo taxaddar dayactirka idaacadaha FM, oo ay ku jiraan qalabka nidaamka gudbinta FM iyo qalabka istuudiyaha FM-ta.
Sidoo kale saamigani waa hagaha dayactirka weyn ee loo isticmaalo in lagaga hortago waxyeello soo gaadha qalabka baahinta ee ka dhasha gabowga iyo hawl galka aan habboonayn iwm, waxaanay bixinaysaa tallaabooyinka la qaadayo ka hor iyo ka dib dhisidda idaacadaha qaarkood, kuwaas oo loo adeegsan karo tixraac. maamulaha saldhiga si uu u gaadho go'aamo lagu ogaanayo cilada.
Ogow in ay sabab u tahay qalabka kala duwan ee gudbinta RF ee goob kasta oo warbaahin ah, hababka dayactirka ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in lagu hagaajiyo xaaladaha dhabta ah iyo saamigan waa tixraac kaliya.
Tani waxay noqon kartaa isfaham la'aanta guud ee hawlwadeeno badan oo idaacadaha:
1. Qalabka baahinta ayaa aad qaali u ah in la dayactiro
2. Dayactirka waa mid aan loo baahnayn waayo waxa laga yaabaa inay waxyeelo u geysato qalabka.
Si kastaba ha ahaatee, tani runtii ma jirtaa? Xaqiiqdu waxay tahay: qalabka baahinta qaaliga ah iyo midka casriga ah, waa in la sameeyaa kormeer iyo dayactir joogto ah.
Marka hore. dayactirka joogtada ah ayaa sidoo kale kordhin kara nolosha ugu badan ee adeegga qalabka ee saldhiggaaga, sababtoo ah kharashka iibsiga ee qalabka baahinta qaarkood waa mid aad u cajiib ah.
Dayactirka macquulka ah, idaacaddu uma baahna inay si joogto ah u beddesho qalabka baahinta qaaliga ah, taasoo ka caawisa idaacaddu inay kaydiso kharash aad u badan oo ay ku beddesho isla qalabka cusub ee baahinta.
Marka xigta, qaar ka mid ah idaacadaha cusub ee LPFM, haddii nolol adeeg wax soo saar dheeraato ama gudbinta calaamadaha maqalka tayada sare leh ee qalabka baahinta la doonayo, markaas waxay noqon doontaa mid lama huraan ah in la dayactiro qalabka xarunta raadiyaha.
Ugu dambayn. Waxa ugu muhiimsan waa in, haddii ay tahay idaacad cusub ama xarun duug ah, dayactirka joogtada ah ee qalabka iyo goobta gudbinta waxay caawin kartaa injineerada dayactirka inay saadaaliyaan dhibaatooyinka dilaaga ah ee laga yaabo inay hore u saameeyaan idaacada, iyo inay sameeyaan tallaabooyin sax ah oo waqtigeeda ah si looga hortago dhibaatooyinka. intaanay dhicin.
Tani waxay xaqiijin kartaa, tusaale ahaan, marka gudbiyaha raadiyahaagu uu si lama filaan ah u gubto dayacnaan la'aanta dayactirka ama gabowga qaybaha, taas oo keenta in barnaamijka raadiyaha uu joojiyo ciyaarta, dhageystayaasha barnaamijka raadiyaha ayaa laga yaabaa inay ka cabanayaan oo ka dibna u wareegaan barnaamijyada kale soo noqnoqoshada raadiyaha oo kala duwan oo ay suurtogal tahay inay ku reebto waayo-aragnimo raadiyaha xun: tani waxay noqon kartaa mid aad uga xun marka loo eego la'aanta maalgelinta bilowga!
Had iyo jeer u fiirso in hawlgalka aan habboonayn, dayactirka, iyo hagaajintu ay si toos ah u horseedi karto burburka qalabka baahinta iyo xitaa khatar gelinaysa badbaadada nolosha shaqaalaha dayactirka qalabka.
Haddaba, inta badan idaacadaha cusub, marka laga soo tago kormeerka iyo dayactirka qalabka baahinta, waxaa sidoo kale la siinayaa tababaro dayactirka lagama maarmaanka u ah shaqaalaha si ay u bartaan aqoonta iyo xirfadaha dayactirka lagama maarmaanka ah, mar walbana la weydiisto in ay si sax ah u isticmaalaan qalabka dayactirka si ay u noqdaan kuwo waxtar leh. waxa ay fulin kartaa guud ahaan shaqada dayactirka joogtada ah ee idaacada todobaad kasta, bille, saddexdii biloodba mar ama sanadkiiba.
Liiska hubinta dayactirka guud ee Idaacadda FM
Haddii aad aad ugu mashquulsan tahay inaad akhrido buug-gacmeedyadaas dhaadheer ama aad u baahan tahay ilaalinta macluumaadka oo keliya, si fiican, ma xuma inaad qaadato dhawr daqiiqo si aad si dhakhso ah u baadho soo koobida dayactirka raadiyaha soo socda iyo talooyinka:
Waa in la yaqaan walxaha
Si taxadar leh u akhri tilmaamaha qalliinka si aad u hubiso inaad si buuxda oo badbaado leh ugu shaqayn karto qalabka, una kaydi tilmaamaha qalliinka si isku mid ah si loo tixraaco mustaqbalka.
Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo ku yimaadda dib-u-habaynta qalabka, fadlan si habboon ugu shaqee sida waafaqsan tilmaamaha ama u gudbi injineerka dayactirka, ama la tasho soosaarayaasha qalabka saldhigga
Haddii qalabka idaacadaagu ay la kulmaan mid ka mid ah xaaladahan soo socda, fadlan kala bixi furka ama dami furaha korontada hore oo la xidhiidh shaqaalaha injineernimada wakhtiga.
1. Haddii qalabku sameeyo dhawaaqyo kala duwan, ama si lama filaan ah u joojiyo shaqada, ama uu leeyahay iftiin aan caadi ahayn oo iftiin ah ama haddii kale ka soo horjeeda xaaladdiisa shaqo ee caadiga ah.
2. IHaddii aaladda ay dhaawacdo mid ka mid ah xaaladaha: daadinta, qoyaanka, gubashada, qarxinta, daxalka, miridhka, ama wax kasta oo kale oo xoog leh.
3. Haddii aaladda la rido ama la dhaawaco si kastaba.
4. Haddii qalabku muujiyo isbeddel waxqabad oo muuqda
5. Haddii qalabku uu roobka ama biyaha la kulmo.
Isku xirka khadka
1. Awooda Korantada: Kahor intaadan iibsan qalab kasta oo koronto ah (ay ku jiraan dhammaan noocyada qalabka baahinta), fadlan horay u sii sheeg danabkeeda, nooca sahayda korantada, iyo macluumaadka kale ee cabbirka ee la xiriira "korontadda" ka hor. Marka aad soo iibsatid qaar ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha raadiyaha ee dalal kale, alaabooyin kala duwan waxay u baahan yihiin koronto kala duwan sababtoo ah waddamo kala duwan ayaa isticmaala hababka gudbinta tamarta kala duwan. Tani waxay u horseedi kartaa noocyo kala duwan oo ah sahay koronto iyo dekedo koronto (badanaa waxaad ku arki kartaa erayada qaar sida 220V sabuuradda dambe ee gudbiyaha FM).
Haddii aadan waqti ku kala saari karin ama aadan aqoon sida loo kala saaro dalbashada ka dib, waxaa fiicnaan lahayd inaad la xiriirto alaab-qeybiyaha si aad u beddesho badeecada ama adeegga soo celinta. Waxa kale oo aad si taxadar leh u akhrin kartaa waxa ku jira buug-gacmeedka alaabta si aad u hubiso in aad qaadato hindisaha isgaarsiinta adeegga iibka kadib.
2. Ilaalinta xadhigga korontadaXadhiga korontadu waa in la mariyaa si aan loogu tuman ama aan loogu dhejin shay la saaray ama ku tiirsan. Fiiro gaar ah u yeelo fiilooyinka ku yaal baloogyada iyo saldhigyada habboon iyo boosaskooda si aad uga baxdo qalabka.
Khadadka korantada: nidaamka anteenada dibeddu waa in aanu ku yaal meel u dhow xadhkaha korontada sare ama nalalka kale ama wareegyada korontada, ama meesha ay ku dhici karto xadhkaha korontada ama wareegyadaas. Markaad rakibayso nidaamka anteenada dibadda, taxaddar dheeraad ah u samee si aad uga fogaato taabashada xadhkaha korantada ama wareegyadaas, sababtoo ah taabashada iyaga waxay keeni kartaa dhimasho.
Kursi badan: ha xad-dhaafin saldhigyada gidaarada ama xadhkaha fidinta maxaa yeelay tani waxay sababi kartaa dab ama shoog koronto.
Bannaanka dhul-dhigida: Haddii anteeno dibadda ah ama nidaamka fiilada uu ku xiran yahay qalabka, hubi in anteenada ama nidaamka fiilada ay u qotomaan si ay u bixiyaan xoogaa ka hortag ah kororka korantada iyo ururinta kharashyada taagan.
NadiifintaHad iyo jeer xasuuso in dareere kasta oo dheeraad ah ama nadiifiyeyaasha sida aerosol-ka aysan wax wanaag ah u lahayn nadiifinta qalabka, laakiin maro nadiifin oo jilicsan oo xoogaa qoyan ayaa ka sii fiican!
accessoriesHa isticmaalin qalabyada aanay ku talin soo saaraha qalabku sababtoo ah waxay noqon karaan khatar.
Si taxadar leh ugu qabo qalabka. Qabashada qallafsan, joogsiyada degdega ah, xoogga xad dhaafka ah, iyo ku socodka meelaha aan sinnayn waxay keeni kartaa in qalabku dhaco ama dhaawacmo.
hawo: Had iyo jeer u dhaaf meel hawo ah oo ku haboon qalabka idaacadaha si aad uga fogaato kulaylka, tani waxay la macno tahay HA ku dhaafin qalabkaaga idaacada meelo yar yar iyo meelo go'an, oo haku daydo hawo furan oo furan halkii aad si dhow u dhigi lahayd meelo adag oo adag sida. gidaar ama sariir. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad wax ka ogaato: samee wax kasta oo ku saabsan qalabka kaliya marka aad tahay injineer dayactirka, ama qalabku si fudud ayaa u burburi karaa sababtoo ah hawlgal aan habboonayn.
Qeybaha bedelka: Marka qaybaha beddelka loo baahan yahay, hubi in farsamayaqaanka adeeggu isticmaalo qaybaha beddelka ee ay qeexday soo-saaraha ama kuwa leh sifooyin la mid ah qaybaha asalka ah. Beddelka aan la fasixin wuxuu keeni karaa dab, koronto, ama khataro kale.
Biyo iyo qoyaanHa u isticmaalin qalabka biyaha agtooda: tusaale ahaan, saxanka qubeyska agtiisa, weelka wax lagu dhaqo, saxanka jikada ama weelka dharka lagu dhaqo; Dhulka hoose ee qoyan; Ama u dhow barkadda dabaasha ama meel kasta oo la mid ah oo qoyan ama qoyan.
Stability: qalabka ha saarin meelo aan xasiloonayn. Qalabku waa dhici karaa inuu soo dhaco, dhaawac halis ah u geysto naftaada ama dadka kale, oo uu dhaawac halis ah u geysto qalabka. Way fiican tahay in lagu rakibo dhammaan qalabka baahinta ee rashka ama baakidhka uu alaab-qeybiyuhu ku taliyay ama lagu iibiyo qalabka.
hillaac: Si aad u siiso difaac dheeraad ah qalabkaaga xilliga duufaanta, ama marka ay ka tagto iyada oo aan la ilaalin oo aan la isticmaalin muddo dheer, ka saar godka gidaarka oo ka saar anteeno kasta ama nidaamka fiilada. Tani waxay ka hortagi doontaa waxyeelada qalabka ay keento hillaaca iyo korontadu kor u kacday.
Walxaha iyo dareeraha: ha ku riixin nooc kasta oo walxaha ka mid ah qalabka iyada oo loo marayo furitaanka, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay la kulmaan meelaha khatarta ah ee korantada ama qaybo gaaban, taas oo keenta waxyeelo qalab, dab, ama shoog koronto. Intaa waxaa dheer, u fiirso qalabkaaga raadiyaha, oo yaan wax kale la dul dhigin qalabka ama waxyaalaha kale ee aan la xiriirin sida biyaha ama dareeraha kale ee lagu dhejiyo dusha qalabka, ma aha cadaadis-iska caabin ama biyo ma galeen.
Kormeerka amniga: ka dib markaad dhamaystirto adeeg kasta ama dayactirka alaabta, weydii farsamoyaqaanka adeegga inuu sameeyo kormeer badbaado si loo go'aamiyo in qalabku ku jiro hawl caadi ah.
Kordhinta gidaarka ama saqafka: Qalabka waxaa lagu rakibi karaa oo kaliya derbiyada ama saqafka si waafaqsan talooyinka soo-saaraha.
HeatQalabka waa in laga fogeeyaa ilaha kulaylka, sida hiitarka, kulaylka maamulayaasha, foornooyinka, ama alaabada kale ee kulaylka dhalisa (ay ku jiraan amplifiers).
Sidee loo Ilaaliyaa Xarunta Gudbinta FM? 5 Wadooyinka Muhiimka ah
1. Beddel qaybaha elegtarooniga ah ee qalabka baahinta/weyn ee heeganka ah, sida tubbada elektarooniga ah, iwm
2. Isticmaal falanqeeyaha spectrum-ka si aad u hubiso in harmonic-ku leeyahay attenuation habboon, oo sawir anteenada iyo xariiqda gudbinta si aad u hubiso inay socoto inta jeer oo ay leedahay xajmiyeed ku filan oo lagu gudbiyo signalka FM
3. Hubi in haanta korontadu ay si caadi ah u shaqeeyaan iyo in kale. Haddii shidaalka loo isticmaalo soo saarista tamarta, hubi heerka saliidda oo dib u buuxi haanta saliidda
4. Hubi in rinjiga derbiyada gudaha iyo dibadda ee goobta uu libdhay ama dhacay, oo dib u hagaaji wakhtiga
Weekly dayactir guud
1. Diiwaangeli diiwaanka shaqada iyo xogta gaarka ah ee qalabka baahinta xudunta u ah sida gudbiyaha baahinta iyo nidaamyada STL, sida gudbiyaha aan caadiga ahayn / ka muuqanaya gudbiyaha ama qiimaha xoogga calaamada ee nidaamka STL, oo ​​samee dayactirka waqtiga. Ha iloobin shaqada dayactirka culeyska xad dhaafka ah, hubi haddii ay jiraan wax aan caadi ahayn adiga oo dib u dejinaya culeys kasta
2. Ka dhig goobta shaqada ee qalabka mid engegan oo nadiif ah, oo hubi in aanay jirin arrimo halis ah oo ka imanaya dibadda, sida biyaha saqafka ka soo daadanaya, korontadu ka daato godka, ama dabaysha soo gelaysa saldhigga dhaawaca darbiga awgeed. Nadiifi qolka wakhtiga si aad u hesho jawi shaqo oo wanaagsan shaqaalaha dayactirka
3. Hubi daacadnimada nidaamka la socodka. Maadaama qiimaha qalabka qolka raadiyaha uu yahay mid aad u sarreeya, oo aan macquul ahayn in loo diro shaqaale ku sii jira qolka raadiyaha (gaar ahaan qaar ka mid ah qolalka raadiyaha ee yaryar), waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in nidaamka kormeerku uu yahay mid dhamaystiran, oo ay ku jiraan nidaamka korontada. kamarada, habaynta fiilooyinka, iwm. haddii ay jiraan wax burbur ah, waa in la hagaajiyo wakhtiga
Bishiiba dayactir guud
1. Marka lagu daro dhamaystirka shaqada dayactirka ee cutubyada toddobaadlaha ah, waxa kale oo lagama maarmaan ah in lagu daro qaar ka mid ah qalabka aasaasiga ah ee firaaqada ah iyo dhamaystirka qoraallada multimeterka, tusaale ahaan, ku xidhka gudbiyaha raadiyaha firaaqada ah ee culeyska culus, si looga fogaado hawada dhimashada raadiyaha.
2. Hubi kaabayaasha gudaha qolka mashiinka, sida dhuumaha, haanta saliidda, haanta biyaha, alaarmiga qiiqa, koronto-dhaliyaha, iwm., si aad u hubiso shaqada caadiga ah ee kaabayaashan, kana fogow dillaaca sababtoo ah cadaadis gudaha ah oo xad dhaaf ah, taas oo laga yaabo inay ka dhalato qaar ka mid ah dhuumaha qulqulaya, daadinta saliida haanta saliida dhalisa iyo shilal kale
3. Hubi in agagaarka xaruntu ay si ku filan u furan tahay, gaar ahaan xagaaga marka ay dhirtu si duur ah u koraan. Si loo helo dabool ballaadhan oo ku saabsan anteenada baahinta, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in meelaha ku hareeraysan ay furan yihiin oo ku filan. Haddii loo baahdo, jar dhirta dhaadheer
4. Hubi in xayndaabka taawarka iyo dhulka taawarku ay adag yihiin, oo xidh albaabka taawarka si aanu qofna si sahal ah u soo gelin.
5. Ku beddel qalabka laga hago fogaanta iyo qalabka gudbiyaha
Saddexdii biloodba gdayactirka tamarta
Marka lagu daro shaqada dayactirka bilaha ah, qaar ka mid ah kaabayaasha aan la dareemin ayaa u baahan in la ilaaliyo waqtigeeda, gaar ahaan qalabka baahinta ee muhiimka ah, sida FM exciter iyo nidaamka STL, dhanka kale, filtarka hawada, laambadda munaaradda, iyo kormeerka rinjiga, iwm. loo baahan yahay
Dayactirka waajibka ah ee sanadlaha ah
1. Marka laga soo tago dhamaystirka hawsha dayactirka ee shaqada saddex biloodlaha ah, waxa kale oo lagama maarmaan ah in la hubiyo shatiyada iyo oggolaanshaha dhammaan qolalka raadiyaha si loo hubiyo in dhammaan shatiyada ganacsiga la cusbooneysiiyey. Marka maamulka raadiyaha maxalliga ahi uu eego qolka, laguma ganaaxi doono
2. Nadiifi gudbiyeyaasha ugu weyn/sugida heeganka ah,laakin hubi in mid ka mid ah gudbiyaasha uu ku jiro xaalad shaqo. Hubi in koronto-dhaliye iyo wareegyada iyo qalabkuba ay si caadi ah u shaqeeyaan
3. Samee kormeer dhamaystiran oo nidaamka anteenada, oo ay ku jiraan habka gudbinta, munaaradda anteenada, iyo kaabayaasha u dhigma
Qaybta gunnada: FCC walxaha is-eegis
1. Alaabooyinka guud: laambadda munaaradda iyo baadhista rinjiga munaaradda
2. Alaabooyinka bilaha ah: Hubi nabdoonaanta xayndaabka munaaradda, hubi in uu ammaan yahay oo xiran yahay
3. Shayada saddex-biloodlaha ah: hubinta soo noqnoqda ee dhammaan kiciyayaasha, qaatayaasha STL, gudbiyeyaasha TSL, iyo logyada.
4. Annually items: accuracy check for all licenses and authorizations, to ensure that all licenses are updated and ready-steady for being checked
Waa maxay 4ta Kharash ee ugu muhiimsan ee Idaacadda?
Marka aad leedahay nidaam aqooneed aad u xirfadaysan oo qalabka baahinta ah, waxaad noqon kartaa maamulaha idaacada ama shaqaalaha dayactirka qalabka.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan maamulayaasha idaacadaha daruuri uma aha inay ku fiican yihiin dayactirka qalabka idaacadaha sida ay sameeyaan injineerada khabiirada RF, iyo kharashka shaqaaleysiinta khabiirka injineerinka dayactirka qalabka raadiyaha ayaa ah mid aad u badan, sidaa darteed kharashka guud ee dayactirka qalabka idaacada guud waa mid aan la qiyaasi karin.
Intaa waxaa dheer, marka kuwa iibiya qalabka baahinta ee ku siin kara qalabka dayactirka iyo dayactirka qalabka ay boqolaal kilomitir kuu jiraan, ama xitaa meelaha qaar ee dhinaca kale ee badda, waxaad bixin doontaa dhowr jeer kharashka dayactirka qalabka caadiga ah. : sababtoo ah waa inaad u dirtaa qalabka dayactirka loo baahan yahay alaab-qeybiyaha guud ahaan badda
Dabcan, waxaad sidoo kale raaci kartaa talooyinkooda: inaad iibsato ama kireysato qaybo cusub oo u dhow raadiyahaaga si aad u bedesho kuwa waxyeellada leh, laakiin kiis kasta, waxaad bixin doontaa kharashka istiraatiijiyadda dayactirka ee aad doorato.
Milkiilayaasha idaacadaha ee qaar ka mid ah wadamada soo koraya, caqli-xumo maaha in ay dib ugu soo celiyaan qalabka baahinta raadiyaha ee baaxada leh ee soo saarayaasha qalabka oo kumanaan mayl u jira. Xamuulka sare iyo kharashaadka dayactirka wakaaladu waa xad dhaaf.
FMUSER waxay halkan ku soo bandhigaysaa qaar ka mid ah kharashyada dayactirka qalabka lagama maarmaanka ah iyo habab caadi ah si loo dhimo kharashaadkan, iyadoo rajaynaysa inay ka caawiso qaar ka mid ah milkiilayaasha idaacadaha inay ka takhalusaan dhibaatada hawlgalka sare iyo kharashyada dayactirka. Kharashyada dayactirka qalabka caadiga ah waxaa ka mid ah:
1. Kharashaadka Gaadiidka
Marka qalabka idaacadaagu u baahan yahay in boostada loogu diro alaab-qeybiyaha, waxaad qaadi doontaa kharashka qalabkan boostada
Sidee Loo Yareeyaa Kharashka Gaadiidka?
Waxaad la wadaagi kartaa kharashaadka sare ee degdegga ah adiga oo gorgortan macquul ah la yeelanaya alaab-qeybiyaha. Waxa kale oo aad heli kartaa bixiyaha adeegga dayactirka qalabka baahinta oo aad bixiso kharashka dayactirka qaarkood si aad u hesho adeegyada dayactirka qalabka u dhigma.
Laakiin tani badanaa waa AMAAN AHAYNMa qiyaasi kartid in kharashyada dayactirka qalabka iyo heerarka dayactirka ee ay bixiyaan qolo saddexaad ay la kulmaan heerarka.
Haddi qalabka idaacadaagu aanu wali u shaqaynin si habsami ah sidii hore xataa boqollaal doollar ee kharashka dayactirka ka dib, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad alaab-qeybiyaha ka soo iibsato isla qalabkii mar labaad, taasoo noqon doonta kharash kale.
2. Kharashaadka Shaqada
Qalabkaaga baahinta wuxuu u baahan yahay dayactir xirfadeed, markaa waxaad u baahan tahay inaad bixiso kharashka kuwa ku siiya adeegyada dayactirka
Qaar ka mid ah kharashyada shaqada ee suurtagalka ah waxaa ka mid ah:
l Mushaharka shaqaalaha dayactirka qalabka
l Kharashka dayactirka shaqaalaha farsamada ee alaab-qeybiyeyaasha (hal mar ama saacad)
l Kharashka qalabka shaqaalaha (badanaa lacag si ay u muujiyaan shirkadaha hal mar)
l Kharashka safarka ee alaab-qeybiyeyaasha (haddii aad ku dhowdahay alaab-qeybiyahaaga oo aad door bidayso inaad farsamayaqaanno u habeeyaan dayactirka goobta, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso qaar kharashyada shaqaalaha ah alaab-qeybiyeyaashaada, sida hoyga iyo kharashyada gaadiidka)
Sidee Loo Yareeyaa Kharashka Shaqada?
Si kastaba ha ahaatee, ma ilaalin kartid kharashaadka kharashka dayactirka gacanta, ilaa aad rabto in aad la wareegto dhammaan shaqada baahinta raadiyaha oo keliya, waa in aad qaadato kharashka dayactirka gacanta oo qayb muhiim ah ka ah kharashka dayactirka qalabka idaacadaha.
Xaqiiqdu waxay tahay, xitaa idaacadaha qaar ee wadamada horumaray iyo gobolada, kharashka dayactirka gacanta ayaa weli ah mawduuc lama huraan ah, laakiin iyada oo loo marayo qaar ka mid ah qorshaynta dayactirka raadiyaha, waxaad si weyn u dhimi kartaa kharashyada dayactirka gacanta ee aan loo baahnayn.
Tusaale ahaan, marka la barbardhigo kharashka qalabka keenista iyo dayactirka alaab-qeybiyeyaasha qalabka iyo kharashka shaqaaleysiinta shaqaalaha dayactirka qalabka, waxaad si fudud u samayn kartaa qorshe dayactir qalab kaas oo si fiican u daboolaya miisaaniyaddaada.
Marka la barbar dhigo adeegyada dayactirka ee ay bixiyaan kooxda saddexaad (sida alaab-qeybiyaha ama shirkadda dayactirka deegaanka), waa inaad wax badan ka barataa dayactirka aasaasiga ah iyo dib-u-habaynta qalabka raadiyaha, oo aad si joogto ah u barato oo aad u barato.
Habkan oo kaliya ayaa kaa caawin kara inaad dhisto wacyiga dayactirka qalabka, yaraynta kharashaadka dayactirka, iyo ka dhigista hawlgalka muddada dheer ee suurtogalka ah ee idaacadda si caafimaad leh.
3. Kharashaadka Hagaajinta Qalabka
Qalabka idaacadaha sida kuwa FM-ka ah ee awooda sare leh, marka lagu daro qolofka aluminiumka ah iyo qaar ka mid ah is-dhexgalka wax soo saarka, waxaa sidoo kale jira qaybo badan oo udub dhexaad ah, sida amplifiers, tuners, circuits, iwm. Si loo dayactiro ama loo beddelo qaybahan asaasiga ah kharash badan noqo.
Haddii aad ka fog tahay alaab-qeybiyaha raadiyaha, iyo fursad ahaan, qaybo ka mid ah xudunta u ah qalabkaaga raadiyaha ayaa hadda gubanaya, waxaa laga yaabaa inaad si isdaba joog ah uga dalbato qaybaha canshuuraha ay ku jiraan mareegaha alaab-qeybiyaha oo aad bixisid kharashaadka xamuulka ee sarreeya.
Ama waxaad dooran kartaa inaad soo iibsatid qaybo la mid ah meel u dhow, oo aad weydiiso injineerkaaga dayactirka qalabka inuu shaqadiisa qabsado, laakiin waxay u badan tahay in farqiga yar ee u dhexeeya qaybaha kala duwan uu keeno ismaandhaafka u dhexeeya iyaga iyo qalabka baahinta ee burburay, taas oo macnaheedu yahay in lacagtaadu ay dhici karto. lagu khasaaray.
Sidee loo yareeyaa Kharashka Beddelka Qalabka?
Haddii aad ka welwelsan tahay tayada qalabka raadiyaha ee aad soo iibsatay oo aad filayso in ay dhimayso wakhtiyada dayactirka, waa in aad doorataa alaab-qeybiyaha idaacadaha ugu fiican ka hor inta aanad wax dalab ah bixin.
Laakiin sidoo kale waa inaad ogaataa in xitaa qalabka raadiyaha ee ay bixiso soo saaraha ugu sarreeya, hawlgalka muddada-dheer & culeyska sare wuxuu si lama filaan ah u keeni doonaa dhibaatooyinka qaybaha mashiinka qaarkood sida gabowga iyo fashilka.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato dayactirka qalabka baahinta raadiyaha ee xilliyeedka ah, gaar ahaan kuwa ay adag tahay in la kala diro qalabka idaacadaha waaweyn, oo aad ku qorto habka dayactirka buugga shaqada, si aad u yareyso kharashka dayactirka isla dhibaatada iyo kharashka beddelka ee qaybaha asaasiga ah.
Intaa waxaa dheer, haddii qalab kasta oo raadiyaha ah uu xumaado oo u baahan yahay dayactir degdeg ah, si looga hortago lumitaanka dhegaystayaasha ee ay sababto hawada dhintay muddo dheer, waa inaad diyaarisaa qaybo qalab ah oo ay ku jiraan kuwa nugul oo inta badan la beddelo, ama la xiriir alaab-qeybiyaha qalabka. oo weydii inay bixiyaan hagitaan dayactirka qalabka maalinlaha ah ama adeegyada kale ee dayactirka onlaynka ah / goobta.
4. Kharashaadka Dayactirka Qalabka
Dayactirka qalabku aad buu muhiim u yahay, waana in aad gelisay tamar iyo kharash badan si aad shaqadan si fiican ugu qabato, taas oo kaa caawin karta sii dheeraynta adeegga qalabkaaga raadiyaha.
Muhiimadda qorshaynta kharashyada dayactirka qalabka ayaa ka baxsan dhammaan tillaabooyinkaas ugu muhiimsan. Marka ugu danbeyn aad ogaato dheelitirka dakhliga iyo kharashaadka idaacadaha, fadlan ha ka bakhaylin inaad qayb ka mid ah dakhliga u qoondayso sidii miisaaniyada dayactirka qalabka.
Haddii aad leedahay aqoon maaliyadeed oo gaar ah, waxaad si fudud u fahmi kartaa in qorshaynta miisaaniyada dayactirka qalabku ay dhab ahaantii tahay dabeecad maalgashi oo macquul ah: marka idaacad ay si joogto ah u shaqeyso dhowr sano, dhibaatooyin badan sida xirashada iyo gabowga qalabka baahinta, dayactirka markaa waa lama huraan.
Laakiin, had iyo jeer xusuusnow in dayactirka qalabku uu si habboon u yareeyn karo heerka xirashada mashiinnada oo dib u dhigo gabowga.
Uma ogolaan kartid inay ku sii jiraan raadiyahaaga weligood si ay kuugu adeegaan adiga iyo dhagaystayaashaada.
Inkasta oo ay jiraan noocyo ka mid ah qalabka idaacadaha oo lagama maarmaan ah, kharashka dayactirka qalabka noocan oo kale ah ayaa had iyo jeer qaali ah, laakiin haddii aad doorato inaad dalbato qalabka cusub ee cusub halkii aad ilaalin lahayd qalabka la isticmaalay, waxaad bixin kartaa dhowr jeer. kharashka dayactirka.
Taa beddelkeeda, iyada oo loo marayo maaraynta miisaaniyada dayactirka raadiyaha macquulka ah, waxaad xaqiijin kartaa in qalabkaaga raadiyaha uu si habsami leh u socon karo muddo dheer.
Xitaa haddii ay jiraan cillado, waxaad yeelan kartaa miisaaniyad kugu filan si aad u hubiso in qorshaha dayactirka qalabka si fiican loo fulin karo
Sidee loo Maamulaa Kharashaadka Dayactirka Qalabka?
Hantida iyo miisaaniyadu waa mawduuca weligeed ah ee mulkiilaha idaacadaha, kaas oo sidoo kale ah saldhigga aasaasiga ah ee badbaadada idaacada.
Marka qalabku xumaado, waxaad dooran kartaa inaad adigu qabato shaqada dayactirka ama ku wareejiso alaab-qeybiyahaaga, laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaad qaadi doontaa kharash badan oo dayactirka qalabka ah.
Waxaa jira fikrado dhowr ah oo kaa caawinaya inaad si habboon u maamusho miisaaniyadda dayactirka qalabkaaga:
- Had iyo jeer xasuuso inaad abuurto dakhli iyo liis kharash bishii
- Isweydii taas, kharashyadaas runtii lagama maarmaan ma yihiin?
- Ogow faraqa u dhexeeya kharashyada hal mar & socda
Waa maxay 10 ka door ee muhiimka ah ee ka jira idaacadaha?
Ku dhawaaqayaasha waxay ku hadlaan idaacadaha, waxay mas'uul ka yihiin baahinta raadiyaha, xayeysiinta iyo ogeysiisyada adeegga, iwm.
2. Injineer sare
Farsamoyaqaanka guud ee raadiyaha, mas'uul ka ah kormeerka shaqaalaha farsamada, dayactirka qalabka iyo nidaaminta, kontoroolka goobta raadiyaha, u hoggaansanaanta iyo kormeerka sharciga ee idaacadaha, iwm.
3. Injineer Dayactirka
Si la mid ah mas'uuliyadda madaxa injineernimada, waxay si gaar ah mas'uul uga tahay dayactirka qalabka ama dib-u-habaynta qalabka baahinta ka dib markii ay hesho cabashooyinka dhageystayaasha
4. Agaasimaha Muusiga
Ka mas'uul ah maaraynta maktabadda muusiga raadiyaha, samaynta qorshaha waxqabadka suuq-geynta raadiyaha, xiriirka dadweynaha, iwm
5. Agaasimaha wararka
Mas'uul ka ah ilaalinta ilaha wararka iyo soo saarista barnaamijka baahinta raadiyaha, hagidda iyo kormeerka shaqaalaha waaxda wararka, iwm.
6. Shakhsiyaadka hawada ku jira
Mas'uul ka ah sheegidda sheekada baahinta dhabta ah. Waa afhayeenkii idaacadaha oo ka duwan kan ku dhawaaqay
7. Agaasimaha wax soo saarka
Wuxuu mas'uul ka yahay soo saarista barnaamijyada idaacadaha iyo saadka qaarkood, kormeeraya habsami u socodka habka wax soo saarka idaacadda.
8. Agaasimaha barnaamijka
Mas'uul ka ah nidaaminta iyo kormeerka waxyaabaha ugu dambeeya ee barnaamijyada raadiyaha
9. Agaasimaha Dalacsiinta
Waxaa mas'uul ka ah dacaayadeynta muuqaalka dibadda ee idaacadda iyo sameynta howlaha xayaysiinta
10. Maareeyaha Saldhiga
Wuxuu mas'uul ka yahay dhammaan arrimaha maalinlaha ah ee idaacadda, sida shaqaaleysiinta iyo tababarida shaqaalaha, samaynta jadwalka baahinta barnaamijka raadiyaha, maareynta dhaqaalaha idaacadaha, iwm.
Haddii aad haysato miisaaniyad ku filan shaqaaleysiinta, waxaad si fudud u heli kartaa koox shaqaale raadiye oo xirfad leh kuwaas oo masuul ka noqon kara isticmaalka maalinlaha ah iyo maamulka idaacadahaaga oo kaa caawin kara inaad la wadaagto shaqada dayactirka raadiyaha ee adag.
Waxa kale oo aad qaadan kartaa fursad aad ku qorato tiro cayiman oo layliyo ah ama iyo mutadawiciinta raadiyaha bulshada siday u kala horreeyaan. Inkasta oo tani ay kordhin karto culayska maamulka shaqaalaha, sidoo kale waa hab wanaagsan oo lagu hubiyo in qalabka raadiyaha si badbaado leh loo shaqeeyo, gaar ahaan marka shaqaalaha dayactirka qalabka qaarkood ay shaqada ka maqan yihiin.
10-ka Agab ee Muhiimka ah ee Idaacad kasta ay tahay in ay yeelato
Shaqaalaha idaacadaha ayaa ah arin muhiim ah si loo xaqiijiyo shaqada caadiga ah ee idaacadu.
Sidaa darteed, fadlan sii shaqaalaha hoos yimaada jawi shaqo oo tayo sare leh oo raadiyaha ah oo aad hubiso oo ilaaliso dhismaha kaabayaasha, taas oo aan hagaajin karin tayada shaqaalaha idaacadaha, laakiin sidoo kale soo jiidan kara martida idaacadaha iyo kor u qaadida niyadsamida ay u hayaan idaacadaada!
Macaamiil badan ayaa ku weydiin doona FMUSER "Maxaa la tixgelinayaa ka hor inta aan la dhisin xarun raadiye xirfad leh?" Jawaabtu runtii waa mid aad u fudud, waxaana loo taxay sidan soo socota:
1. Sahay Nolol Deggan
Biyo xasiloon iyo koronto ayaa ka dhigaya barnaamij raadiyaha tayada sare leh oo la baahin karo. Ha iloobin inaad bixiso xaaladaha nololeed ee lagama maarmaanka u ah hawlgalka joogtada ah ee idaacadda!
2. Qolal leh hawlo kala duwan
- Qolka sigaarka
- qolka duubista
Xataa aagga alaabta lagu ciyaaro ee carruurta waxa loo qaabayn karaa si waafaqsan miisaaniyadaada!
3. Baahiyaha maalinlaha ah
- Qaybiyeyaasha biyaha
- Tuwaalada waraaqaha ah
- Maqaayad shaah ah
- Mashiinnada kafeega
Xitaa mashiinnada dharka lagu dhaqo waa la qori karaa, aynu qof walba dareensiino inuu guriga joogo!
4. Necessary Furnitures
- Fadhiyada fadhiga
Had iyo jeer xasuuso inaad bixiso martidaada iyo asxaabtaada leh ares dheeraad ah oo loogu talagalay nasashada iyo shaqada!
5. Qalabka Korantada
- Foornooyinka Microwave
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad buuxiso baahiyaha maalinlaha ah ee shaqaalaha istuudiyaha raadiyaha, waa intaas!
6. Iftiinka Studio
- Laambada miiska
Kuwan la'aanteed, khadka aragtida qof kasta oo ku jira istuudiyaha laga yaabaa inay saamayso!
7. Qurxinta Studio
- Habka naqshadeynta
- Qaabka raadiyaha.
Aan ku samayno aragti fiican martida idaacada!
8. Naqshadaynta Badbaadada
- Ka hortagga dabka
Marna ma rabi doontid in dadaalkaaga la khasaariyo!
9. Sahayda gaarka ah
- Maaskaro caafimaad
- Khamriga jeermis dilay
Qaado istuudiyaha raadiyaha sidii gurigaaga labaad!
10. Xaaladaha Nadaafadda
Marka loo eego faafitaanka caalamiga ah ee COVID-19, waxaa lagama maarmaan ah in fiiro gaar ah loo yeesho ka hortagga iyo xakameynta shaqsiyeed, gaar ahaan meelaha qaar ee xaddidan sida istuudiyaha raadiyaha.
Sidaa darteed, si loo xaqiijiyo xaaladaha fayadhowrka ee idaacadaha, laba tillaabo ayaa loo baahan yahay in la sameeyo: Nadaafadda aasaasiga ah iyo ka-hortagga iyo xakameynta cudurrada faafa.
- jeermiska jeermiska
- Calaamadaynta iyo kaydinta midaysan ee alaabta gaarka ah
- Inaad nadiifiso gacmaha marka aad qalabka gacanta ku hayso
- Labbis nadiif ah oo nadiif ah la ilaaliyo
- Candhuuf la'aan
- Ma jirto qashin
Had iyo jeer xasuuso inaad nadiifiso istuudiyaha raadiyaha, oo ay ku jiraan:
- Ka saarida cayayaanka guriga
- Boodhka ururinta
- Nadiifinta qashinka
- Nadiifinta Desktop
- Nadiifinta roogagga
- Fdhogorta kaadida
Kahortagga & Xakamaynta COVID-19
- Heer kulka martida
- Maaskaro mar walba waa la shidaa oo aan iska bixin haddii aan loo baahnayn
- Had iyo jeer xasuuso inaad isticmaashid aalkolo si aad u jeermiso qalabka baahinta ee la isticmaalay martida
- Diyaarinta waxyaabaha daruuriga ah ee maalinlaha ah ee martida,
Istuudiyo nadiif ah oo nadiif ah ayaa had iyo jeer dadka ka dhiga farxad!
6 Talooyin Faa'iido leh oo lagu Hagaajinayo Maamulka Qalabka Idaacadda
Dayactirka qalabka baahinta ayaa ka duwan dayactirka alaabta caadiga ah. Qalabka baahinta ayaa aad u saxsan oo badiyaa leh kharash dayactir oo sarreeya. Sidaa darteed, ka hor inta aanad wax dayactir ah ku samaynin istuudiyaha raadiyaha, waa inaad marka hore tixgelisaa laba arrimood oo muhiim ah: shaqaalaha dayactirka iyo miisaaniyadda dayactirka
Marka la soo koobo, cudud iyo agabku waa arrimo aan laga maarmi karin oo lagu tixgalinayo dayactirka qalabka idaacadaha. Waxay aad isugu dhow yihiin midba midka kale. Lacagaha dayactirka qalabku ku filan yahay iyo miisaaniyada qorista ayaa inta badan shaqaaleysiin kara shaqaale ka fiican qalabka dayactirka, halka agabyada kale, sida qorshooyinka dayactirka qalabka oo faahfaahsan, ay kor u qaadi karaan doorka cudud iyo maaliyad waxayna gacan ka geysan karaan hagida dhammaan habka dayactirka qalabka baahinta.
Waxaa xusid mudan in si kasta oo aan u bixino dadaallada lagu faah faahinayo qorshooyinka dayactirka qalabka, waxaa mar walba jiri doona isbeddello lama filaan ah oo dhici kara inta lagu jiro dayactirka dhabta ah.
1. Diyaari nuqullada buug-gacmeedyada alaabta
Si looga fogaado wax kasta oo macluumaadka dayactirka muhiimka ah ee maqan, nooc kasta oo ah qalabka istuudiyaha raadiyaha waa inuu lahaadaa dhowr koobi oo ah tilmaamaha alaabta muhiimka ah iyo kuwa firaaqada ah.
2. Hel Hoggaan
Qof gaar ah waa in la magacaabaa oo mas'uul ka ah tababarrada badbaadada ee shaqaalaha raadiyaha iyo maamulka qalabka midaysan
3. Qor Tilmaamaha Qalabka Raadiyaha
Qorista buug-gacmeedyada alaabta ama ka soo qaadashada buug-gacmeedyada alaab-qeybiyeyaasha qalabka qaar ka mid ah qalabka baahinta inta badan la isticmaalo, ama lagu dhejiyo qaar ka mid ah qalabyada FAQs ee laga yaabo inay soo baxaan, iyo ku dheji taxadar markaad qalabka ku isticmaalayso meelo muuqda si looga fogaado wax kasta oo shil ah oo soo gaara qalabka raadiyaha.
4. Qabashada Tababarka Gudaha
si joogto ah u qabata tababbarka gudaha ee shaqaalaha istuudiyaha baahinta, sharax hababka isticmaalka iyo taxadarka qalabyada kala duwan ee istuudiyaha, oo si joogto ah u hubiso saamaynta tababarka
5. Hel Goobaha Dejinta Qalabka ugu Fiican
Marnaba ma ogaan doontid sababta qalabkaas baahinta u dhaawacmi doono sababo jira awgood, kuwaas oo noqon kara shil aan ku talo gal ahayn oo uu ninku sameeyay ama uu si ula kac ah u jabiyo ama u qalloociyo qalabka.
Haddaba, marka laga soo tago tabobarrada gudaha iyo ka fogaanshaha adeegsiga awoodda baahinta qalabka, waxa kale oo aad diyaarsan kartaa meel gaar ah oo qalabka idaacadaha ah oo aad ka ilaaliso, tusaale ahaan, raadso meel ay dadka waaweyni qalabka ka gaadhaan laakiin carruurtu aanay awoodin, ama ku dheji dhejisyo digniin ah oo loogu talagalay isticmaalka qalabka, si loo yareeyo xiriirka xad dhaafka ah ee u dhexeeya qalabka studio iyo kooxda saddexaad ee gobolka aan shaqayn.
6. Warbixinta Ciladda Dayactirka
Shaqaalaha dayactirka waa in loo habeeyaa si ay uga warbixiyaan dhibaatooyinka farsamada wakhtiga marka qalabka ku jira istuudiyaha baahinta uu xumaado oo ha iloobin dayactirka qalabku inuu yahay farsamo-yaqaan kaliya
"Qofku waa inuu ka fikiraa ganacsigiisa"
7. Dhis Kooxdaada Raadiyaha
Xitaa haddii aad sheegan karto inaad tahay agaasime raadiye, farsamayaqaan RF, iyo injineer dayactirka qalabka isku mar, laakiin runtu waxay tahay inaad haysato 24 saacadood oo keliya maalintii, waxay ku qaadan kartaa saacado badan qalabka u baahan dayactir joogto ah. , taasina waa qayb ka mid ah shaqooyinka maalinlaha ah ee raadiyaha, waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato inaad wakhti ku qaadato duubista jawaab celinta qalabka: waxay u badan tahay inaad waydo macluumaadka muhiimka ah ee habkan.
Haddaba maxaad isku deyin inaad u qoondayso hawlahan shaqaale gaar ah? Waxaan ula jeedaa, haddii aad leedahay koox raadiyaha ah ... Waad isku dubaridi kartaa shaqadooda, weydii inay sameeyaan warbixin shaqo oo faahfaahsan, oo soo jeedi talooyin, kuwaas oo laga yaabo inay noqdaan meesha aad ku siin karto cayaar buuxda si aad faa'iido weyn u leedahay.
8. Liis garee Kharashyadaada iyo Keydkaga Bishii
Dayactirka qalabka iyo dib u habeyntu waa in ay noqdaan mudnaanta ugu sareysa ee shaqada raadiyaha. Xitaa haddii aad u maleyneyso inay weli jiraan arrimo kale oo badan oo tan ka muhiimsan, waxaad bixin doontaa qiimo xanuun leh haddii qalab kasta oo raadiyaha uu joojiyo shaqada inta lagu jiro baahinta barnaamijyada raadiyaha sababtoo ah dayactir la'aan.
Tani waxay ku xasuusinaysaa inaad taxdo kharashaadka iyo kaydka idaacadaada bishiiba mar, si aad ugu qoondayso miisaaniyada dayactirka iyo gadashada wakhti ku haboon oo macquul ah.
Gaar ahaan idaacadaha qaar ee u nugul kharashaadka iyo miisaaniyada, waxa aad u xikmad badan in la badbaadiyo qayb ka mid ah dakhliga idaacaddu bishii ka soo gasho dayactirka, dib-u-habaynta iyo iibsashada, xataa haddii aanad lacagta si ku meel gaar ah u isticmaalin, laakiin ma damaanad qaadi kartid. inaadan u baahnayn inaad bedesho wax qalab idaacad ah ama aad wax dayactir ah iyo dib u habayn ku samayso qalabka raadiyaha mustaqbalka.
Intaa waxaa dheer, inaad meel iska dhigto qayb ka mid ah kaydkaaga maadaama miisaaniyadda dayactirka qalabku ay ku siin karto xasilloonida maskaxda.
Ma kharash lama huraan ah mise kharash aan loo baahnayn?
Mar walba waxa jiri doona kharashyo aan muhiim ahayn xisaab-xidhahaaga saddex biloodlaha ah ee idaacadda, laakiin kharash kasta ayaa lagama maarmaan iyo maangal u ah dayactirka qalabka idaacadaha.
Haddii aad ogaato in qaar ka mid ah kharashyada aan loo baahnayn ay ka badan yihiin kharashyada lagama maarmaanka ah, waa inaad ka digtoonaato in dakhligaaga lagu isticmaalo meelo aan muhiim ahayn, oo wakhti ku habboon ku hagaajiso xaaladda dhabta ah.
Ma kharash hal mar ah mise kharash joogto ah?
Shaqaale kasta oo ka shaqeeya idaacad, laga bilaabo maareeyaha idaacada, injineerka RF ilaa martigeliyaha raadiyaha, waxay rajeynayaan in maalgelinta dhammaan qalabka idaacadaha ay yihiin kharash hal mar ah, taasoo macquul ah.
Haddii inta badan qalabka loo baahan yahay in si joogta ah loo beddelo, waxay shaki la'aan ku kordhin doontaa kharash aad u badan milkiilaha saldhigga. Injineerka saldhigga, Tani waxay la macno tahay rakibidda qalab dheeraad ah iyo tijaabinta culayska shaqada.
Martigeliyaha raadiyaha, tani waxay ka dhigan tahay inuu u baahan yahay inuu waqti badan ku bixiyo barashada sida loo isticmaalo qalabka.
Maalgelinta kharashaadka hal mar ah, sida qaar ka mid ah qalabka gelinta maqalka iyo alaabta guriga, ayaa laga yaabaa in lagu isticmaalo idaacadahaaga sanado badan haddii si habboon loo ilaaliyo; Qaybaha qalabka qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in si joogta ah loo beddelo si loo ilaaliyo xaaladdooda shaqo ee wanaagsan
Kharashyada kale ee dayactirka raadiyaha, sida kharashka maalinlaha ah ee daruuriga ah, tamarta, iwm. Kuwani waa kharashyo joogto ah.
Haddii miisaaniyadaadu ku filnaan waydo, waxaad u baahan doontaa inaad yarayso kharashyada hal mar ah oo aad u wareejiso qaybtan miisaaniyada sidii kharashyada dayactirka qalabka haddii loo baahdo.
9. Soo hel alaab-qeybiye khabiir ah
Haddii aad leedahay alaab-qeybiye raadiye oo khabiir ah, HAMBALYO! Inta badan waxaad heli kartaa xal raadiyaha oo dhameystiran, taasoo la micno ah in marka lagu daro qalabka aasaasiga ah ee raadiyaha, adeegyada gaarka ah qaarkood, sida rakibida qalabka, dayactirka qalabka, iyo adeega iibka kadib, ayaa sidoo kale la bixin doonaa.
Si kastaba ha noqotee, haddii alaab-qeybiyahaagu uu bixiyo adeegyadan iyo in kale waxay kuxirantahay baahidaada iyo miisaaniyadaada. Idaacadaha wadamada soo koraya iyo gobolada ayaa inta badan u baahan adeegyada furaha, laga bilaabo liisaska qalabka idaacadaha oo dhamaystiran ilaa rakibida iyo dayactirka. Sababta ayaa ah inta badan sababtoo ah la'aanta khibradda baahinta iyo miisaaniyad la'aanta.
Maamulayaasha xarumaha qaarkood ayaa rakibi doona oo dayactiri doona qalab kasta oo saldhigeed laftooda. Si kastaba ha ahaatee, waxa laga yaabaa inay soo baxdo waxyeelo aan loo baahnayn oo soo gaadha qalabka sababtoo ah hawlgal aan haboonayn, taas oo kordhin karta kharashka dayactirka qalabka.
Sidaa darteed, marka aad raadinayso alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoonaan karo marxaladda hore ee qorshaha dhismaha idaacada, ka sokow barashada khibradda dayactirka qalabka, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad la xiriirto adeegyada dayactirka dheeraadka ah alaab-qeybiyeyaasha, gaar ahaan kuwa leh ujeeddada iskaashiga.
Sidan oo kaliya, marka idaacadaadu ay ka maqan tahay khibrada dayactirka qalabka ama ay ku yaraato dhibaatooyinka qalabka ee ay adagtahay in la hagaajiyo, waxaad la xiriiri kartaa alaab-qeybiyaha idaacadaha si aad u hesho caawimo.
Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah shuruudaha dayactirka qalabka idaacadaha ee ay inta badan weydiiyaan macaamiisheena qaarkood marka ay raadinayaan wadashaqeyn mustaqbalka fog:
l Bixi qorshe dayactir qalab oo dhamaystiran dhowrka sano ee soo socda ka dib markii lagu guulaysto aasaaska saldhiga
l Bixi buug-gacmeedka dayactirka qalabka baahinta bilaashka ah iyo tilmaamaha
l Marka qaar ka mid ah qalabka baahinta u baahan yahay dayactirka boostada, waa inay si wadajir ah u qaataan kharashaadka degdegga ah
l Bixi taageero qalab online macquul ah, oo ay ku jiraan telefoonka iyo network
l Bixi hagaha dayactirka goobta ee shaqaalaha dayactirka qalabka
l Muddada xaddidan ee dammaanadda, qaybaha ama qalabka waa la bedeli karaa haddii ay dhacdo waxyeello mashiinka oo ay sababaan arrimo aan bini'aadmi ahayn
Fiiro gaar ah: marka aad kala hadasho adeegyadan dayactirka alaab-qeybiyaha, fadlan ku dhaqan qandaraaska ama qoraalka, oo qor wixii uu agab-qeybiyahaagu kuu ballanqaaday.
FMUSER waa soo saaraha qalabka raadiyaha ee xirfadleyda ah kana yimid Shiinaha. Waxay bixiyaan xalal tayo sare leh oo loogu talagalay iibsadayaasha qalabka raadiyaha oo leh miisaaniyado kala duwan, oo ay ku jiraan xirmooyinka qalabka idaacadaha oo dhamaystiran, hababka gudbinta raadiyaha oo dhamaystiran, iyo taageero farsamo oo tixgelin leh.
Isla mar ahaantaana, FMUSER sidoo kale waa maareeye khabiir idaacad la isku halayn karo, waxaan ka caawin karnaa dhammaan noocyada idaacadaha si ay u fuliyaan hawl maalmeedka iyo maaraynta dayactirka. Laga bilaabo miisaaniyadaada, waxaanu sidoo kale kaa caawin karnaa samaynta qorshaha ganacsi ee ugu fiican ee habaynta idaacada gaarka ah.
Aynu ka wada hadalno FMUSER mustaqbalka ifaya ee baahinta raadiyaha!
4 Siyaab oo Wax ku ool ah oo aad ku xarayn karto Ganacsigaaga Xarunta Raadiyaha
Faylasha qalabka istuudiyaha raadiyaha ayaa ku dhow sida muhiimka ah sida qalabka laftiisa, oo lagu daray, waxaa jira qalab kala duwan oo warbaahin ah oo ku jira istuudiyaha, iyo heerarkooda shaqo ee kala duwan, sidaas darteed hababka dayactirka ee u dhigma ayaa sidoo kale ka duwan.
Waxaa laga yaabaa inaadan haysan nidaamka aqoonta badeecada oo dhamaystiran sida alaab-qeybiyahaaga raadiyaha, iyo macluumaadka tafatiran qaarkood waxaa loo hayaa sir ganacsi oo aan liiska ku jirin.
Sidaa darteed, waa wax aan macquul aheyn in aad hesho macluumaad daabacan oo isku mid ah oo ku saabsan buug-gacmeedyada by Googling muddo gaaban gudaheed, gaar ahaan buug-gacmeedyada muhiimka ah qaarkood. Waxaa intaa dheer, qalabkani waa qaybo ka mid ah alaabtaada lacag bixinta. Fadlan maskaxda ku hay muhiimada agabkan.
Haddii aad waydo, waxaa laga yaabaa inaadan ka heli karin buug-gacmeed la mid ah alaab-qeybiyaha qalabka si bilaash ah mar labaad. Sidaa darteed, xasuuso inaad xarayso kuwan "alaabta bilaashka ah"
1. Abaabul Galalka Qalabka Muhiimka ah
Buug-gacmeedka alaabtu wuxuu noqon karaa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee faylasha istuudiyaha raadiyaha. Waxay ka kooban tahay dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee alaabta u dhiganta ee magaca, qaabka, xuduudaha, dayactirka, iwm.
Qaar ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha raadiyaha xirfadleyda ah ayaa bixin doona xalalka furaha istuudiyaha raadiyaha oo dhameystiran. Kaliya maaha inay naqshadeeyaan xirmada qalabka istuudiyaha ee sida ugu fiican u daboolaysa miisaaniyadaada raadiyahaaga laakiin sidoo kale waxay ku siin doonaan rakibaadda goobta iyo hawlgelinta qalabka (haddii shuruuduhu oggolaadaan) waxayna ka tagi doonaan jaantusyada fiilooyinka ee qalab kasta oo istuudiyaha ah.
Marka la samaynayo dayactirka qalabka toddobaadlaha ama bilaha ah, gaar ahaan dayactirka fiilooyinka qalabka raadiyaha, jaantuska fiilooyinka ayaa si sax ah nooga caawin kara inaan ogaano cilladaha.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ka qaadi kartaa sawirro ama fiidiyowyo rakibidda qalabka iyo goobta shaqada oo aad duubi kartaa habka oo dhan. Marka Injineerkaagu aanu lahayn tilmaamaha dayactirka qalabka, sawiradan iyo fiidiyowyadan ayaa ka dhigi kara inuu iftiimo.
2. Samee Log Duubista Gaarka ah
Haddii aad ahaan lahayd maareeyaha idaacadaha, waxaa waajib kugu ah in aad si deggan u shaqeyso istuudiyaha raadiyaha iyo nidaamka gudbinta, taas oo macnaheedu yahay in aad u baahan tahay in aad duubto habka guud ee baahinta raadiyaha bilowga ilaa dhammaadka, oo ay ku jiraan tafatirka mashruuca baahinta, qalabka in uu yahay. la isticmaalo, iwm., oo ka kooban dhammaan khibradahaaga iyo indha-indheyntaada.Sidaa darteed, buuggan duubista waa inuu noqdaa mid gaar ah.
RF iyo injineerada dayactirka ayaa mas'uul ka ah siday u kala horreeyaan ilaalinta goobta baahinta iyo dayactirka qalabka. Laakiin dhammaan maareeyayaasha idaacadaha maaha injineerada RF.
Injineerada idaacadaha, diiwaanka diiwaanka gaarka ah ayaa sidoo kale loo baahan yahay, laakiin waxa la duubay ayaa laga yaabaa inay u janjeeraan dayactirka qalabka iyo xalalka.
3. Buugga Qalabka Homebrew
Tani waxay u badan tahay sida tababarka qalabka. Shaqaalaha dayactirku waxay duubi karaan macluumaadka muhiimka ah qaarkood, oo wax ka beddelaan oo u habayn karaan casharrada isticmaalka alaabta, sida habaynta cabbirka caadiga ah ee qalabka duubista ka hor, ama duubi karaan sida saxda ah iyo sida badbaadada leh ee loo shido/demiyo qalabka, ama loo duubo qalabka habka kaydinta nidaamka, ama duubista noocyada qalabka ee horay loo dabaqay, iwm.
Qalabka guud ee ku shaqeeya duubista wuxuu bixiyaa hab wax ku ool ah oo loogu talagalay shaqada dayactirka.
Sidoo kale waa buug-gacmeed wanaagsan, kaas oo sahlaya kharash yar oo tababar ah oo kaa caawinaya inaad si weyn u dhinto kharashka hawlgalka iyo dayactirka idaacadaha, kuwa cusub ee raadiyaha, waxay wax badan ka fahmi karaan sida idaacad u shaqeyso.
4. Kaydinta Midaysan ee Diiwaangelinta
Dabcan, waxa ugu muhiimsan waa in la helo meel xogtan muhiimka ah lagu kaydin karo si isku mid ah oo ammaan ah, hadday tahay buug-gacmeedka alaabta, jaantuska xargaha qalabka, ama sawirada iyo fiidiyowyada goobta rakibidda, iwm.
FMUSER waxay aad ugu talinaysaa in la ururiyo dhammaan faylalka loo baahan yahay ee qalab istuudiye kasta oo raadiyow ah oo lagu ururiyo meel sahlan oo la geli karo, qalalan iyo meel heerkul caadi ah, ha ilaawin inaad qaaddo tillaabooyinka baakadaha aan qoyaanka ka ilaalinayn.
Marka dayactirka qalabka loo baahan yahay in lagu qabto wakhtiga, kooxda dayactirka ayaa si degdeg ah uga jawaabi kara oo heli kara qalabka dayactirka qalabka ku habboon marka ugu horeysa
3 Noocyo Maareyneed oo ka jira Xarunta Raadiyaha Xirfadlayaasha ah
Si kastaba arrintu ha ahaatee, waa in uu maareeyaha saldhiggu u xilsaaran yahay dhammaan arrimaha idaacadda, balse maareeyaha kaligiis ma gaari karo shaqaale baaxad leh iyo maamulka qalabka.
Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la dejiyo qorshe maamul oo tafatiran oo lagu dayactirayo saldhigyada, lana hirgeliyo xilliyada qaarkood
1. Maamulka Qalabka Idaacadda
Qalabka maqalka, alaabta guriga, qalabka korontada, iyo xitaa qufulka albaabada. Qalab nooca uu doono ha ahaadee, waa in aad xisaabisaa dhammaan qalabka idaacadaha iyo qalabka studio ee aad soo iibsatay, kala saar magacyada qalabkan, oo geli kaydinta xogta kombiyuutarkaaga
Isla markaana, waa inaad sidoo kale magacawdaa qofka masuulka ka ah waax kasta. Marka ay jiraan dhibaatooyin gaar ah oo ka jira goobta baahinta, sida hakinta barnaamijka ee ay sababtay cilladda mishiinnada, waax kasta ayaa si dhakhso ah uga jawaabi karta.
Shaqaalaha dayactirka qalabka ayaa mas'uul ka noqon doona dayactirka mashiinka iyo duubista diiwaanka dayactirka, iyo shaqada xiriirka dadweynaha ee mas'uulka ka ah sharaxaadda sababaha hakinta daawadayaasha waxaa lagu wareejin doonaa martida loo yahay.
Qofka mas'uulka ka ah amarka goobta waxaa lagu wareejin doonaa qofka ugu muhiimsan ee mas'uulka ka ah, iwm ... wax walba waxay u muuqdaan inay hagaagsan yihiin, sax? Ujeedadu waa inaad diyaarisay qalabkan baahinta iyo mas'uulka ku habboon!
2. Maaraynta Shaqaale kasta oo Raadiyo ah
Hawl-wadeenka raadiyaha, injineerka RF, shaqaalaha goobta, nin iftiiminaya, iyo xitaa martida raadiyaha, dhammaan doorarkan ayaa garbanaya hawlo kala duwan. La'aanta mid ka mid ah iyaga ka mid ah waxay kuu horseedi doontaa luminta faseexnimada baahinta barnaamijkaaga raadiyaha.
Haddii aad ahaan lahayd maareeyaha idaacada, waa inaad horay u sii ogaataa habka barnaamijka raadiyaha.
Lana socdaan qayb kasta oo ka mid ah hab-socodka oo dhan laga bilaabo soo saarista barnaamij ilaa baahinta, kana jawaaba wakhtiga ay shaqaalaha qaar si lama filaan ah u baxaan ama ay fasax weydiistaan, si loo horumariyo guud ahaan hufnaanta shaqo ee raadiyaha loona hubiyo in baahinta caadiga ah ee barnaamijyada raadiyaha.
3. Maaraynta Raadiyaha
Habka wax soo saarka ee barnaamijyada raadiyaha, habka dayactirka qalabka raadiyaha, habka wareejinta shaqaalaha, iwm ... waa inaad sameysaa dukumeenti gaar ah si aad u duubto habka shaqada ee soo noqnoqda ee idaacad kasta.
Markaad diyaar u tahay inaad qorto shaqaale cusub oo raadiyaha, waxaad ku tababari kartaa diiwaanadan si aad u hubiso in hawl qabad wanaagsan ay hesho idaacada